Home » သတင်း » 5G-SDI နှင့်အတူ Aja သင်္ဘော KONA 12 I / O
5G-SDI နှင့်အတူ Aja သင်္ဘော KONA 12 I / O
တိုကျို, ဂျပန်, အင်တာမီလန်ပျား Booth #7205 (နိုဝင်ဘာ 14, 2018) - အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာယနေ့ Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ KONA5ယခုရေကြောင်းကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Aja ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် KONA လိုင်း KONA5၏မျိုးဆက်သစ်နောက်ဆုံးပေါ် 12G-SDI I / O ထောက်ပံ့နေတဲ့ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ I / O ကဒ်သည်နှင့် HDMI စက်သို့မဟုတ် Thunderbolt ™ 2.0-connected ကိုယ်ထည်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ3စောင့်ကြည့်ရေးဗီဒီယိုကဆက်သွယ်မှု။ KONA5/ Single-cable ကို 4K ဖွUltraHD မြင့်မားတဲ့ frame rate ကို, နက်ရှိုင်းသောအရောင်နှင့် MacOS, Window နဲ့ Linux ပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဖန်တီးမှု applications များနှင့်အတူ HDR Workflows ။ အဆိုပါ Aja SDK ကိုသုံးပြီး Developers များအတွက် KONA5လည်း Multi-ရုပ်သံလိုင်း 4K I / O နှင့် 8K 60p ထောက်ခံမှုအပါအဝင်အဆင့်မြင့် features တွေပေးထားပါတယ်။
KONA5feature ကိုပျေါလှငျတို့ပါဝင်သည်:
12G-SDI I / O နှင့် HDMI 2.0K များအတွက်4output ကို, UltraHD, 2K, HD နှင့် YUV 4-bit မှာ 60 မှာ 10K 4p မှ HFR ထောက်ခံမှုတက်နှင့်အတူ SD က: 2:2နှင့် RGB 12-bit မှာ 4: 4:44K 30p အထိ
4x bi-directional 12G-SDI ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ကြံ့ခိုင်အပေါ် 1x ကိုးကားစရာခုနှစ်, HD-BNC connectors နှင့်အတူ HDပါဝင်သည် full-size BNC ကြိုးတွေမှ -BNC
16-ရုပ်သံလိုင်း SDI အပေါ် embedded အသံ, 8-ရုပ်သံလိုင်း embedded အသံအပေါ် HDMI
8-ရုပ်သံလိုင်း AES အသံ I / O, LTC I / O နှင့်သည် RS-422 အမှတ်စဉ်ထိန်းချုပ်မှုထောက်ပံ့ချိုးထွက် cable ကိုကနေတဆင့်
ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက် 10-bit နဲ့မြစ်အောက်ပိုင်း keyer
Adobe ကအတူ compatibility® Premiere Pro ကို®, ပန်းသီး® ဗိုလ်လုပွဲဖြတ် Pro ကို X ကို, လွန်စွာလိုလားသော® မီဒီယာ Composer®, Telestream အတွက် Wirecast®, Aja ထိန်းချုပ်ခန်းနှင့်ပိုပြီး
Multi-ရုပ်သံလိုင်း 4K I / O နှင့် 8K ဖမ်းယူသို့မဟုတ်ပလေးအောက်အပါအဝင်အဆင့်မြင့် features တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ Aja SDK ကိုလိုက်ဖက်မှု,
အင်တာမီလန်ပျား 2018 စဉ်အတွင်း Aja တစ်ခု HP ကကို Workstation အပေါ် 5K output ကိုများအတွက် Colorfront ရဲ့ QC Player ကိုဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပို့လိုက်ကြတယ်အပါအဝင် KONA 8 ၏အမြင့်ဆုံး resolution ကစွမ်းရည်, ပြနေသည်။
KONA5$ 2995 အမေရိကန် MSRP များအတွက် Aja ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်လည်ပတ်: www.aja.com/products/kona-5
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2018-11-14
ယခင်: ATECH လျှပ်တစ်ပြက်မီးနည်းပညာအားဖြင့် BLACKJET VX-1r ကို USB 3.1 GEN2အနီရောင် mini-MAG Reader ကို
နောက်တစ်ခု: Aja KONA, IO နှင့် T-TAP များအတွက် Desktop ကိုဆော့ဝဲ v15 ဦးလွတ်မြောက်
အင်္ဂါနေ့, 1pm အိမ်ရှင်: ရိုင်ယန် Salazar ဧည့်သည်များ: ဂျင်မ် Chabin သမ္မတ, အဆိုပါအဆင့်မြင့် Imaging Society က Th
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် 2020 NAB ပြရန်
တနင်္လာနေ့, 10am အိမ်ရှင်: ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ဧည့်သည်များ: Alexis Macklin Greenlight Insights, Irena Cronin
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်အပြင်စွဲငြိဖွယ်ရာအကြောင်းအရာစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ဖောင်းပွနိုင်ငံတော်
တနင်္လာနေ့, 9am | Dell က Technologies ကအိမ်ရှင်များကကမကထ: Debra Kaufman ဧည့်သည်ဒါဝိဒ် Morin က Epic Games
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်ရဲ့ Virtual ထုတ်လုပ်မှု amp; post: အဆိုပါသိပ်မသိသာ
တနင်္လာနေ့, 10: 30am အိမ်ရှင်: ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ဧည့်သည်များ: ဂျိုးဇက် Muniz VR / AR အစည်းအရုံး, ဟန္နင့်ဖောက်သည့်
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များကရှင်းလင်းချက်: xe, VR, MR, AR
တနင်္လာနေ့, 9am | Dell က Technologies ကအိမ်ရှင်များကကမကထ: Debra Kaufman ဧည့်သည်များ: Grover ပြတ်သား Sony က Pict
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
တနင်္လာနေ့, 1: 00pm အိမ်ရှင်: ဖိလိပ္ပုမမေ့ဘူးဧည့်သည်များ: Fred သည် Fourcher CEO နဲ့တည်ထောင်သူ | Bitcentral, Kenny
Bitcentral #2019 အကြောင်း Talking 39 #NABShow တိုက်ရိုက်; s ကိုလောင်စာ
တနင်္လာနေ့, 12: 30pm အိမ်ရှင်: ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ဧည့်သည်များ: နန်စီ Bennett ကနှစ်ဦးဆပ်ကပ်, Gregg Katano Hol Bit
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်တည်နေရာအခြေပြု Entertainment က
တနင်္လာနေ့, 4: 30pm အိမ်ရှင်အဖြစ်: လင်ဒါ Rosner ဧည့်သည်များ: Janice Pearson convergence, Rick Soto Pixel L ကိုစွန်
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်လုံခြုံရေး: ထိုအခါနှင့် Now ကို
တနင်္လာနေ့, 3: 30pm | Ruptly ကကမကထအိမ်ရှင်အဖြစ်: ရှင်ပေါလု Richards, Tess Protesto ဧည့်သည်ဒန် Rayburn S က
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် LinkedIn တို့တိုက်ရိုက်
တနင်္လာနေ့, 2: 30pm အိမ်ရှင်အဖြစ်: စတိဗ် Wong ကဧည့်သည်များ: Z ကို၏ကာရယ်လ်ဟက် VP | HP က, ဒင်း Sanderson Z ကိုဘူတာ PR
ဒါဟာတစ်ဦးက New နည်းပညာဆိုင်ရာဟောလိဝုဒ်စတိဗ်အတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကျေးရွာယူ 2019 #NABShow Live
တနင်္လာနေ့, 1: 30pm | ဖိလိပ္ပုကမမေ့ဘူးဧည့်သည်များ: ဂယ်ရီ Adcock, ဒံယေလ Svobo Bitcentral ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကကမကထ
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်အားလုံးသည် The New Technologies ကထိရောက်သောအင်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြသည်ကိုဘယ်လို
တနင်္လာနေ့, 12pm အိမ်ရှင်အဖြစ်: ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ဧည့်သည်များ: ဂျနီဖာကွတ် Dreamscape VR, အန်ဒီ Cochrane ဣမေ
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် XR ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာရှင်းလင်းချက်
တနင်္လာနေ့, 11am | Sadie သတို့သားဧည့်သည်များ: Liam Hayter NewTek, Wesl ATTO နည်းပညာကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကကမကထ
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်မည်သို့နယူးစျေးကွက်များ amp ထဲသို့ချိုးခြင်းငှါ၎င်း, နယ်မြေ
တနင်္လာနေ့, 5: 30pm ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်: Ninaad Kulkarni နှင့် Pupul Bisht ဧည့်သည်များ: စတီဗင် Calcote ဒါရိုက်တာနှင့်တွေ့သည်
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်တနင်္လာနေ့: ဇာတ်လမ်းတွေကို pt2 များ၏အနာဂတ်
တနင်္လာနေ့, 5pm အိမ်ရှင်အဖြစ်: Ninaad Kulkarni နှင့် Pupul Bisht ဧည့်သည်များ: ဂျိမ်း Cridland ရေဒီယို Futurologist, R ကို
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်တနင်္လာနေ့: ဇာတ်လမ်းတွေကို pt1 များ၏အနာဂတ်
တနင်္လာနေ့, 4pm အိမ်ရှင်အဖြစ်: ရိုင်ယန် Salazar ဧည့်သည်များ: အင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်, Ph.D နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CTO | NewTek ။
NewTek ၏အင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူ 2019 #NABShow တိုက်ရိုက်အဆိုပါ NDI တော်လှန်ရေးတွင်
တနင်္လာနေ့, 3pm | Ruptly ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကကမကထ: ရှင်ပေါလု Richards, Tess Protesto ဧည့်သည်များ: Ahmet Cakan Rupt
ARRI နှင့်အတူ 2019 #NABShow တိုက်ရိုက် Ruptly
ကြာသပတေးနေ့, 11: 30am | ATTO အိမ်ရှင်များကကမကထ: Sadie သတို့သားဧည့်သည်များ: Lorenzo Zanni IABM, အန္န Lockwo
NAB ပြရန်ထံမှ 2019 #NABShow တိုက်ရိုက် & Emerging Trends
ကြာသပတေးနေ့, 12: 30pm | Ruptly အိမ်ရှင်များကကမကထ: လင်ဒါ Rosner ဧည့်သည်များ: Tech မှ၏ Dale Canino ဒါရိုက်တာ
2019 #NABShow အဝေးမှမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု Live: IP ကိုရပ်တန့်ရန်
ကြာသပတေးနေ့, 10: 30am | Bitcentral အိမ်ရှင်များကကမကထ: လင်ဒါ Rosner ဧည့်သည်များ: ဘာဘရာ Lang အလုပ်အမှုဆောင်: D
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် SMPTE အမျိုးသား
ကြာသပတေးနေ့, 9: 30am အိမ်ရှင်: Debra Kaufman ဧည့်သည်အာရုန် Stern ပာ Stern ပာအကျိုးသက်ရောက်မှု, Pierre ၏ Jasmine RE: Visi
Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအတွက် 2019 #NABShow တိုက်ရိုက် Plug ins နှင့်နည်းပညာ
ကြာသပတေးနေ့, 12: 00pm | Ruptly အိမ်ရှင်များကကမကထ: လင်ဒါ Rosner ဧည့်သည်များ: စီးပွားရေးဂျွန် Humphrey VP
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်အိုင်ပီ SMPTE 2110
ကြာသပတေးနေ့, 10: 00am | Linda Rosner: Bitcentral အိမ်ရှင်များကကမကထပြု။
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်ကင်မရာနည်းပညာအတွက်နောက်ဆုံးနဲ့အကြီးမြတ်ဆုံး
ကြာသပတေးနေ့, 9: 00am အိမ်ရှင်: Debra Kaufman ဧည့်သည်များ: ကီဗင်ကို Shaw Colorist Society ကအင်တာနေရှင်နယ်။
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် Colorist Society ကအင်တာနေရှင်နယ်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 1pm အိမ်ရှင်: လင်ဒါ Rosner ဧည့်သည်များ: ရစ်ချတ် McKernan Avid Pro ကိုအသံ, ဘရိုင်ယန် Castle Avid
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် Avid #39; s ကိုသင်ယူအစီအစဉ်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 2pm | စတိဗ် Wong ကဧည့်သည်များ: Dell က Technologies ကအိမ်ရှင်များကကမကထပြု Ralf ယာကုပ်အမျိုးကိုနိုငျငံတျောသမ်မ |
အသံလွှင့် 2019 အတွက် OTT စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ပုံ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 3pm | Ruptly အိမ်ရှင်များကကမကထ: ရှင်ပေါလု Richards, Tess Protesto ဧည့်သည်များ: တွမ် Sinclair ကို C
ကိုးကွယ်မှုများ၏အိမ်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှု၏ 2019 #NABShow တိုက်ရိုက်အနာဂတ်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 5pm အိမ်ရှင်: လင်ဒါ Rosner ဧည့်သည်များ: ဂျင်မ် DiFilippis SMPTE ဟောလိဝုဒ်သဘာပတိက Tim Stevens V ကို
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် 5G နည်းပညာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 4pm အိမ်ရှင်: Ninaad Kulkarni နှင့် Pupul Bisht ဧည့်သည်များ: Matt Rowell 360 Labs က, အီး Samantha
ဇာတ်လမ်းတွေ, အပိုင်း 2019 ၏ 1 #NABShow တိုက်ရိုက်အနာဂတ်
အင်္ဂါနေ့, 3pm | Ruptly အိမ်ရှင်များကကမကထ: ရှင်ပေါလု Richards, Tess Protesto ဧည့်သည်များ: တွမ် Sinclair eas
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဒုတ်
အင်္ဂါနေ့, 5pm | Dell က Technologies ကအိမ်ရှင်များကကမကထ: စတိဗ် Wong ကဧည့်သည်များ: ရစ်ချတ် Whittington, SVP
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်မည်သို့ AI အကြည့်ရှုမှု amp ကိုခန့်မှန်းနိုင်သ; Listenership
အင်္ဂါနေ့, 9am အိမ်ရှင်: မေီ DeLouise Adryenn အက်ရှလေဧည့်သည်များ: နန်စီ Bennett က, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို Creative အရာရှိ, T-
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် #GALSNGEAR
အင်္ဂါနေ့, 4: 30pm အိမ်ရှင်: ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ဧည့်သည်များ: Liz Heller Membrain, LLC မိုက်ကယ် Rucker Omni
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် immersive Advertising ကြော်ငြာနှင့်လက်လီ Tech မှ
အင်္ဂါနေ့, 5: 30pm | စတိဗ် Wong ကဧည့်သည်များ: ဂျိမ်း Robertson က CTO ကြော်ငြာ Dell က Technologies ကအိမ်ရှင်များကကမကထပြု
2019 #NABShow သင်က IP ကို ​​amp အကြောင်းကိုသိရှိရမည်အဆိုပါငါးအရာ Live; Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်ယက်
အင်္ဂါနေ့, 10: 30am အိမ်ရှင်: ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ဧည့်သည်များ: ဘင် Carlin XR Media Group သို့, Josh Dixon က Samsung က
2019 #NABShow တိုက်ရိုက် 360 အတွက်တိုက်ရိုက် Going
အင်္ဂါနေ့, 11: 30am | Sadie သတို့သားဧည့်သည်များ: ဒါဝိဒ်သည် Sallak Pixit ငါ့ကို ATTO နည်းပညာအိမ်ရှင်များကကမကထပြု
2019 #NABShow တိုက်ရိုက်သင်မည်သို့သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကနေရွယ် Get သလား?
ထုတ်လွှင့်နဲ့ Chris Aller ကြောင်း y ကိုဝှက်ထားသောကျောက်မျက်အားလုံးကို 2019 NAB ပြပွဲကြမ်းပြင်ကျော်ကိုရှာဖွေ s Beats
2019 #NABShow က Hidden ကျောက်မျက်ရတနာ
Zylight ယခုတစ် Ushio Group မှကုမ္ပဏီတစ်ခု simp နှင့်အတူ 2003 အတွက်ယာကုပျနှငျ့ချားလ်စ် Collias နေဖြင့်စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်
Zylight: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
ZiXi software ကိုအတွက်အကြီးမားဆုံးထုတ်လွှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ဝေသောအင်ဂျင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Zixi: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Wowza မီဒီယာစနစ်များ™ 24000 အကောက်ခွန်ထက်ပိုအတူ streaming များ၏အသိအမှတ်ပြုသောရွှေစံနှုန်းဖြစ်ပြီး
Wowza မီဒီယာစနစ်များ: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
ZEPLAY ရှည်လျားများအတွက်လက်ငင်းပြန်ကန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရ, တည်ငြိမ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်
Zeplay: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
မီဒီယာများတွင်အမျိုးသမီးများသည် networ ပေးခွငျးအားဖွငျ့ရုပ်ရှင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျားမဟန်ချက်အားပေး
မီဒီယာများတွင်အမျိုးသမီးများ: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
PERSEUS ™အနိုင်ရ V ကို Nova s ​​ကိုဆုချီးမြှင့်သည့် promi အပေါ်ကယ်တင်သောသာလက်ဝါးကပ်တိုင်မီဒီယာ codec ကို format တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
V ကို Nova: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Vecima ကွန်ယက် Inc ကို (TSX: ဗီဒီယိုဖန်တီးမှုဈေးကွက်) အောင်မြင်မှုများ Technological ဖန်တီးခြင်းအတွက်တစ်ဦးတကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်
Vecima ကွန်ယက်: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Vimond မီဒီယာ Solutions (www.vimond.com) ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်, modular အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနဲ့ထုံးစံ OT ဈေးကှကျ
Vimond မီဒီယာ Solutions: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ထွက်ခွာဖို့ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ထုတ်လွှင့် enable ပြုလုပ်စနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုး
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Translations.com ပါဝါ gl မှနည်းပညာနှင့်ဘာသာစကားဖြေရှင်းချက်လောကီသားတို့သည်အ s ကိုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါသည်
Translations.com: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
TownNews: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
PolyPort 3D ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းပလက်ဖောင်းကိုစျေးကွက် collabora ကာကွယ်ပေးသည်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသည်
PolyPort: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Vladislav "Vlado" Struhar, QTake သမ္မတ - Screenport သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အပွငျ, SCR demos
ScreenPort SDI: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
ဘရိုင်ယန်ကနေဒီ, ကုန်ပစ္စည်း Manager ကိုအာရုံစိုက် optio အတိုင်းလိုက်နာ PDMovie ၏မျိုးဆက်သစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးပြောပြ
IKAN PDMovie: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
အင်ဒရူး Siminoff ကိုအသစ်နှင့်တိုးတက် LITRA Torch ဘို့အရောင်းစစ်ဆင်ရေးပြပွဲနှင့်ပို့လိုက်ကြတယ်၏ VP
LITRA: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
ဘရိုင်ယန်ကနေဒီ, ကုန်ပစ္စည်း Manager ကို IKAN ကြိမ်မြောက်မိတ်ဆက်ကြောင်းသစ်ကိုကင်မရာအိတ်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးပြောပြ
IKAN ကင်မရာလှောင်အိမ်: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Eurofins ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ခြင်းပြည့်စုံစမ်းသပ်ခြင်းထုတ်လုပ်သူမှဖြေရှင်းနည်းများ, ထုတ်လွှင့်, Operations ကယ်တင်တတ်၏
Eurofins ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ခြင်း: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
MEDIAPRO PR, အကြောင်းအရာပေါင်းစည်းမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့, ဥရောပအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ကဏ္ဍတွင်ဦးဆောင်အဖွဲ့
MediaPro: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
IPE Technologies ကအဆိုပါ broadca များအတွက်ဦးဆောင်အစွန်းနည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် 30 နှစ်ကြာအောင်ထားပြီး
IPE Technologies က: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
2013 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Aperi တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုမီဒီယာရာထူးအမည် Virtualization (MFV) sol ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးဖြစ်ပါတယ်
Aperi: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Barnfind s ကိုအစွမ်းထက်စွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်သူတို့၏ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းအစစ်အမှန်တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်ကယ်တင်
Barnfind အမေရိကန်နိုင်ငံ: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
core SWX ဘက်ထရီနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အားသွင်းဖြေရှင်းချက်ထဲမှာစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်, ဒစ်ဂျစ်တယ် Cine
core SWX: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
FilmConvert beautif ကယ်တင်ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပေးခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့ပါဝါပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
FilmConvert: #NABShow VIDEO အင်တာဗျူး
TAG VS ဆန်းသစ်သော IP ကိုစောင့်ကြည့် High Quality မြင်ကွင်းစုံ Solutions အတွက်အထူးပြုသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော
2019 NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး VS TAG ။ @TAGVS @NABShow #NABShow
#NABShow မှာ IBM က Aspera ။ @asperasoft @NABShow
အဘို့အ https://sip.audio @ipDTL သုံးပြီးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အသံပညာရှင်များအဘို့အရီးရဲလ်အချိန်ဆက်သွယ်မှု
ခုနှစ်တွင်: #NABShow မှာအရည်အသွေး ipDTL ။ @InQualitymedia @NABShow
Kino flo HD ကိုရုပ်ရှင်, တီဗီ, Digita ဘို့နဲ့ LED FLO ပျော့အလင်းရောင်စနစ်များထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်
#NABShow မှာ Kino flo ။ @Kinoflo @NABShow
ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် cam-corders, မော်နီတာ, projector ကိုနှင့်စတူဒီယိုစနစ်များထုတ်လုပ်သူ, p
#NABShow မှာ JVC Professional က။ @JVCProfessional @NABShow
Meinberg ထုတ်ကုန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် functi အဖြစ်သရုပ်ဆောင်, အရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်၎င်း module ဖွဲ့စည်းထားပါသည်
@MeinbergSync #NABShow @NABShow မှာ Meinberg Funkuhren
MyCaseBuilder ဏဖြစ်ပွားမှုများအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံဒီဇိုင်းအမြှုပ် INSERT အတွက်အဆုံးစွန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်
MyCaseBuilder: NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @MyCaseBuilder @NABShow
NAB အမေရိကတိုက် s ကိုရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်, ထို MOS ပေးသူကို
#NABShow မှာရေးအဖွဲ့ညွန့်ပေါင်း။ @ResponsibleFans @NABShow
1 ဒုတိယအတွင်းကမ္ဘာတဝှမ်း nanoStream တိမ်တိုက် Interactive မှတိုက်ရိုက်လွှ, လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်း Softw
NAB Show မှာ nano ဠာ။ @nanovideo @nabshow #NABShow
ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ 1955 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ဒါဟာကြော်ငြာထံအပ်နှံဖြစ်ပါတယ်
NATAS: 2019 NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @TheEmmys @NABShow #NABShow
Omniscien Technologies ကမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့် L ကို secure
Omniscien: 2019 NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @NABShow #NABShow
Hertz ကတွင်မိမိတို့၏ပရိတ်သတ်ကိုရန်ပိုမိုနီးစပ်ရဖို့တင်ပြ enable လုပ်ဖို့ရေဒီယိုစတူဒီယို dematerialises!
Hertz က on: 2019 NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @On_Hertz @NABShow #NABShow
စမတ် display ရဲ့အနာဂတ်ခေတ်အဘို့အစွန်နည်းပညာဖြတ်တောက်ခြင်း, VR, ချိတ်ဆက်ကားများနှင့်မိုဘိုင်း။ ကျွန်တော်တို့၏
Orbie: 2019 NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @NABShow #NABShow
လာရီအို Connor အားဖြင့် 1988 အတွက် Woodstock, IL ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, MacSales.com ချဉ်အွန်လိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ခဲ့
OWC နောက်ဆုံး @macsales @NABShow #NABShow @OWCLarry
PAG fo အများဆုံးနည်းပညာအဆင့်မြင့်ကင်မရာအာဏာနှင့်အလင်းရောင်စနစ်များထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်
PAG: 2019 NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @PAG_UK @NABShow #NABShow
မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကိုလိုလားသူသည်ဗီဒီယိုနှင့်တွေ့ဆုံအဘယ်မှာရှိ။ ဗီဒီယိုတစ်ကားထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုသို့သင့်ရဲ့ device ကို Transform ။ အခုတော့အင်း
PADCASTER: 2019 NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @Padcaster @NABShow #NABShow
PHABRIX ဆန်းသစ်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်, ထိရောက်သောစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းကုန်ကျ
PHABRIX: 2019 NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်။ @PHABRIXLTD @NABShow #NABShow
Pilotfly ထိုင်ဝမ်မှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်3ဝင်ရိုးတည်ငြိမ်စေဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်လည်း vide
Pilotfly: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Platypod ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်ကမ္ဘာ့အ s ကိုအများဆုံးကျစ်လစ်သိပ်သည်း mini ကို tripod စေသည်။ အနိမ့်ထောင့် sho အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော
Platypod: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
pixel ကို Power ခများအတွက်ဆန်းသစ်ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံပလေးအောက်ကိုပေးပို့စနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေး
pixel Power: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
စတူဒီယို Suite စာရင်း, အချိန်ဇယားဆွဲများအတွက်စာတိုက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးဆော့ဖျဝဲဖြေရှင်းချက်သည်နှင့်
စတူဒီယို Suite: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
Aja ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, post ကိုနှင့် Pro ကို AV စနစ် application များအတွက်ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာဖြစ်သည်။ Affordab
Aja ဗီဒီယို: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
က Blockbuster ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းကျတိုးတက်လာ Sa ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကဖွယ်ရှိအဆက် s
ကွမ်တမ်: 2019 NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @QuantumCorp @NABShow #NABShow
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အိမ်ရှင်စတိဗ် Wong ကတွေ့ဆုံမေးမြန်း TechXmedia နိုင်ငံတော်သမ္မတ Spencer Stephens နှင့်အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရန်
ငါ POST ထုတ်ကုန်များအတွက်အစိုးရ grade မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးလိုပါသလား
Show ကိုတိုက်ရိုက်အိမ်ရှင်လင်ဒါ Rosner ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်အင်ဒရူး Shulkind နှင့်ဒုတိယသမ္မတနှင့်အတူဆင်းထိုင် NAB
အင်ဒရူး Shulkind နှင့် Sony ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှု VP ဒံယလေသ de la ရို Talk ကို Artificial Intelligence
စတိဗ် Wong ကအင်တာဗျူးများ DragonChain CMO နဲ့ Chris ဂျုံးစ် Crypto ဖန်ဆင်းရှင် Erik Sords cryptocur ဆွေးနွေးခြင်း
စတိဗ် Wong ကအင်တာဗျူးများ Dragonchain CMO နဲ့ Chris ဂျုံးစ် Crypto ဖန်ဆင်းရှင် Erik Sords
2000 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Bitcentral အကျိုးရှိစွာမီဒီယာ workflow နှင့် cus ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Bitcentral: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
ရှင်ပေါလု Richards နှင့်, Tess Protesto အရှေ့ Shore အသံလွှင့် CEO ဖြစ်သူတွမ် Sinclair, PTZ အိုတို့ကပူးပေါင်းနေကြတယ်
ရှင်ပေါလု Richards နှင့်, Tess Protesto 21st ရာစုအသံလွှင့်ဒုတ်ဆွေးနွေး
ရှင်ပေါလု Richards နှင့်, Tess Protesto LinkedIn တို့ s ကိုဂျက်စီကာချန်း, လူမှုရေးတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူအားဖြင့်ပူးပေါင်းနေကြတယ်
ရှင်ပေါလု Richards နှင့်, Tess Protesto LinkedIn တို့တွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်ဗီဒီယိုဆွေးနွေး
ရှင်ပေါလု Richards နှင့်, Tess Protesto အင်တာဗျူး Ruptly s ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်, Ahmet Cakan ၏ဦးခေါင်း
ရှင်ပေါလု Richards နှင့်, Tess Protesto အင်တာဗျူး Ruptly နှင့် ARRI Executives
2019 NAB Show ကိုအင်တာဗျူး: Host ကလာရီလယ်သမား Lanski အင်တာဗျူးများ Jon Toor, Cloudian ၏ CMO ။
2019 NAB Show ကိုအင်တာဗျူး: Host ကလာရီလယ်သမား Lanski အင်တာဗျူးများ Lee က Griffin ဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းစျေးကွက်
Lee က Griffin EditShare ၏ Worldwide မှ Marketing Manager
2019 NAB Show ကိုအင်တာဗျူး: Host ကလာရီလယ်သမား Lanski အင်တာဗျူးများကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက် Anup ၏ Interra VP
ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက် Anupama Anantharaman ၏ Interra VP
2019 NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အိမ်ရှင်ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ဃမှမစ်ရှင်ရော့ခ်ဒစ်ဂျစ်တယ် CTO ပတေရုသLudéနှင့်အတူဆင်းထိုင်
ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst အင်တာဗျူးများမစ်ရှင်ရော့ခ်ဒစ်ဂျစ်တယ် CTO ပတေရုသLudé
2019 NAB Show ကိုအင်တာဗျူး: Host ကလာရီလယ်သမား Lanski အင်တာဗျူးများ Ed က Abis N ကိုမှာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာ
Ed က Abis Never.No မှာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာ
2019 NAB Show ကိုအင်တာဗျူး: Host ကဘရိုင်ယန်ရှသေ Hurst CreatorUp ကို Creative ဒါရိုက်တာ, မင်းသား Hugh H ကိုနှင့်အတူဆင်းထိုင်
CreatorUp ထံမှဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Hugh Hou
ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst အင်တာဗျူးများ interac ဖို့အဆိုကိုရုပ်ပုံသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးခြင်း AR အမှတ်တရမှာအသင်း Host
AR အမှတ်တရ CEO ဖြစ်သူ Rene Amador
ထုထည်ကြီးမားသောနဲ့အလင်း fi အပါအဝင် immersive အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာနှင့်ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းနည်းပညာ Exploring
ViaLite ဆက်သွယ်ရေးဒီဇိုင်းနှင့်ဖိုင်ဘာလင့်များနှင့်စနစ်များကျော် RF ထုတ်လုပ်တယ်။ ViaLite တစ် div ဖြစ်ပါသည်
ViaLite: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @ViaLite @NABShow #NABShow
VSN: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @vsn_tv @NABShow #NABShow
2019 NAB Show ကိုအင်တာဗျူး: အကြောင်းကို San Diego မှကနေ Host ကခရစ် McWatt အင်တာဗျူးများ Anchorman တွင် Ron Burgundy
TownNews နှင့်အတူ San Diego မှ Anchorman တွင် Ron Burgundy
2019 NAB Show ကိုအင်တာဗျူး: Host ကခရစ် McWatt Wowza မီဒီယာက S ဖြင့် Video လွှပလက်ဖောင်းများဆြေးြေိံး
Wowza မီဒီယာစနစ်များ #39; ဖြေရှင်းချက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်က Tim Dougherty
Dell က EMC သင့်ရဲ့အသွင်ပြောင်းဖို့ Dell က Technologies ကကတိကဝတ်များ၏အစွမ်းထက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ v သော့ဖွင့်
Dell က EMC: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @DellEMC @NABShow #NABShow
Todd တစ်ဦးကဒင်း 25 နှစ်ကျော်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလည်း Tel ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်
မတတ်နိုင် Cyc ဝေါလ်: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။
object Matrix ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာရှေ့ဆောင်တော်မူကြောင်းကိုတစ်ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရတဲ့, ဗြိတိန်အခြေစိုက်, ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Objective Matrix: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Object_Matrix @NABShow #NABShow
Pixit မီဒီယာအဆိုပါ Post ကို Productio အတွက်ဒေတာသတိထားမိ, ဆော့ဖ်ဝဲသတ်မှတ်ထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုး
PIXIT: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @PixitMedia @NABShow #NABShow
ထုတ်လွှင့်အလိုအလျောက်၌ရှည်လျားသောသမိုင်းနှင့်အတူ, Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ su တစ်အစုစုကိုတီထွင်ထားပါတယ်
Pebble ကမ်းခြေသဲသောင် Systems: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @pebbleupdates @NABShow #NABShow
အဆိုပါပြောင်းလဲမည်အမေရိကတိုက် s ကိုဦးဆောင်ဗီဒီယိုကိုဖြေရှင်းချက် service provider ကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမည်လက်ရှိထောက်ပံ့
switch သည်: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး @theswitchtv @NABShow #NABShow
Caringo software ကိုသတ်မှတ်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုတိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ Cloud သိုလှောင်မှုများကိုကူညီပေးသည်
CARINGO: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @CaringoStorage @NABShow #NABShow
Link ကိုအီလက်ထရောနစ်တစ်ဦးအရည်အချင်းမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိယာမအပေါ် 1989 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်
LINK Electronics: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Linkelectronics @NABShow #NABShow
RT ကိုဆော့ဝဲ hou အတူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်တစ်ခုထူထောင်ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
RT ကိုဆော့ဝဲ: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @RTSoftware @NABShow #NABShow
ပြင်သစ်သုတေသနနည်းပညာအင်စတီကျုပိုမြန် #hypermedia ၏အနာဂတ်အားဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့် sma
BCOM: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @IRT_BCom @NABShow #NABShow
ကွမ်တမ်နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖောက်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာ, ဖမ်းဆီးဖို့ဖန်တီးမျှဝေကူညီ - နှင့်
ကွမ်တမ်: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @QuantumCorp @NABShow #NABShow
မဲလ်ဘုန်း, ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက်, အမေရိကန်, Qligent Inc ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ software ကို developer နဲ့ cloud ့ဖြစ်ပါတယ်
QLIGENT: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Qligent @NABShow #NABShow
Densitron #HMI (လူ့စက် interface ကိုအခြေခံပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုထိတွေ့ဒီဇိုင်းတစ်ခု display ကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး
DENSITRON: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Densitron @NABShow #NABShow
မဆိုစမတ်တီဗီ app ကိုအဘို့စမ်းသပ်အလိုအလျောက်။ #HbbTV, #FreeviewPlay, #Tizen, #WebOS, #Xbox, #tvOS, #Andro
SUITEST: အကြို NAB ပြရန်ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပါ။ @suite_st @NABShow #NABshow
အမြစ်များ 1942 ဖို့ခြိနျးတှေ့နှင့်အတူ, Dielectric ယင်းထုတ်လွှင့်အသက်အရွယ်ရှေ့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့သည်, ငါတို့ drive ကိုတီထွင်ရန်
titan တီဗီ: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow
EditShare: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @EditShare @NABShow #NABShow
နေ့တိုင်း Globecast အကြောင်းအရာနာရီကြာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖိုင်ဘာ၏ 75000 မိုင်ကျော်စီးဆင်းပေးပို့သည်။ သူတို့
GLOBECAST: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Globecast @NABShow #NABShow
Plura ဖြေရှင်းချက်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် mu ၏ကျယ်ပြန့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းတစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်
PLURA ထုတ်လွှင့်: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @PLURABROADCAST @NABShow #NABShow
FileCatalyst နည်းပညာ Unlimi Tech မှ Software များ Inc ကိုတစ်ကမ္ဘာကဌအနိုင်ရEmmy®ဆုအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်
FileCatalyst: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @FileCatalyst @NABShow #NABShow
Voxnest, Podcast တခုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ပြည့်စုံတစ်စုံနှင့်အတူ mo Podcast တခုကိုကြေညာသူနှင့်ကြော်ငြာရှင်များထောက်ပံ့
Spreaker / Voxnest: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @SPREAKER @VOXNEST @NABShow #NABShow
တေ Staig အဆိုပါ Tisch Departm ထံမှသူမ၏မာစတာ့ဒီဂရီဝင်ငွေကတည်းကရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွင်ခဲ့
မီဒီယာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏: တေ Staig, အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @WomenNMedia @NABShow #NABShow
Signiant ကမ္ဘာကြီးကို s ကိုကြီးမားသောအချို့များအတွက်ဖိုင်လွှဲပြောင်း software ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာအမြစ်တွယ်နေတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်
Signiant: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Signiant @NABShow #NABShow
Telestream®ဆိုပရိသတ်ကို r ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာရဖို့ဖြစ်နိုင်စေကြောင်းထုတ်ကုန်အထူး
Telestream: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Telestream @NABShow #NABShow
IBM က Aspera ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေဏရွှေ့လမ်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမြန်နှုန်းမြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများဖန်တီး
IBM က ASPERA: အကြို NAB Show ကိုဗွီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @AsperaSoft @NABShow #NABShow
ဝီလျံဟေးယက်, ကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာ Society ၏လတ်တလောအတိတ်မှနိုင်ငံတော်သမ္မတကြိုတင် NAB Show ကိုက c ရှိပါတယ်
ကို IEEE: အကြို NAB ပြရန်ဝီလျံဟေးယက်နှင့်အတူဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @IEEEBTSociety @NABShow #NABShow
EVS: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @EVSEquipment @NABShow #NABShow
1944 ၌မိမိတို့စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Shotoku ထုတ်လွှင့် solutio, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်သွင်းယူထားပြီး
SHOTOKU: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @NABShow #NABShow
SPROCKIT®စက်မှုလုပ်ငန်း့အထင်ကရသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကစားနည်းယနေ့ s ကိုမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုရည်ညွှန်းပြသ
SPROCKIT: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @SPROCKIT @NABShow #NABShow
Tedial စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိရောက်မှုနှင့် profitabil တိုးမြှင့်ကြောင်းမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုး
TEDIAL: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Tedial_MediaIT @NABShow #NABShow
အဆိုပါ Zype မိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုထုတ်ဝေ, မဟုတ်လား, streaming များ, ပရိသတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ana ထောက်ပံ့
ZYPE: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Zype @NABShow #NABShow
စကေး ​​Logic ဒီဇိုင်းများ, Integrated ဒါကြောင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောလိုင်းဖြန့်ချထားနှင့်ထောက်ခံပါသည်
အကြေးခွံ Logic: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Scalelogic @NABShow #NABShow
Embrionix ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမြင့်မားသိပ်သည်းဆ IP ကို ​​gateway များ, signal ကိုပရိုဆက်ဆာ, converters အဖြစ်နှင့်မြင်ကွင်းစုံကိုထောက်ပံ့ပေး
Embrionix: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @embrionix @NABShow #NABShow
TAG VS: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @TAGVS @NABShow #NABShow
ဒီကြိုတင် NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက်, ချက်ပြုတ်စက္ခုဗေဒ၏က Les Zellan ငါတို့ကဲ့သို့ချက်ပြုတ်သမိုင်းအကြောင်းကိုပြောသွား
Cook optical: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Cooke_Optics @NABShow #NABShow
Cantemo®မျိုးဆက်သစ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) အတွက်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်လမ်းပြရန်ထူထောင်ခဲ့သည်
CANTEMO: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @Cantemo @NABShow #NABShow
ထုတ်လွှင့် Depot အီးကြောင်းအပြည့်အဝစိန်ခေါ်မှုများကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့သူအင်ဂျင်နီယာများကတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဖွဲ့သည်ဂုဏ်ယူ
ထုတ်လွှင့် Depot: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @broadcastdepUS @NABShow #NABShow
ဒါရိုက်တာများနှင့်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာများမီး, သင်တို့ရှိသမျှသည် windo အတူပါလာသောစိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကိုငါသိ၏
ထုတ်လွှင့်လူကန်းအကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow
ကမ္ဘာကြီးကို s ကိုဦးဆောင်ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပူးပေါင်းပလက်ဖောင်း။ အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောဗီဒီယိုဖန်တီးသူကတည်ဆောက်
Frame.io: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @Frame_io
crystal ကိုeများ၏စောင့်ကြည့်မှု, ထိန်းချုပ်မှုနှင့် metadata စီမံခန့်ခွဲမှုအလိုအလျောက်ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုထောက်ပံ့ပေး
crystal: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @connect2crystal
Cinegy မီဒီယာနှင့်ရုပ်သံလွှင့် software နှင့်နည်းပညာများ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်အာရုံစိုက်။
Cinegy: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @Cinegy
အဆိုပါမန်ဒီကွန်ယက်သရုပ်ဆောင်များကိုလောကီသားတို့သည်အ s ကိုအကြီးဆုံးဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်း, ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ကိုသင်္ဘောသား, ပြဇာတ်ရုံဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါမန်ဒီကွန်ယက်: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @TheMandyNetwork
1988 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, TBC အဖွဲ့အပါအဝင်ထုတ်လွှင့်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု consoles စတစ်အထူးပြုနှင့်အတူစတင်
TBC အဖွဲ့စက်များ: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @tbcconsoles
အမေရိကန်အသံလွှင့်ဂျွန်စေအတွက်ဦးဆောင်သည်သူ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက် NAB ပြရန်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အရေးပေါ်: အကြို NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow
Accedo ကဗီဒီယို consu ၏ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံကိုအသွင်ပြောင်းရှေ့ဆောင်ဖြစ်ပါသည်
Accedo: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow
PTZOptics ကင်မရာလိုင်း HDMI, HD ကို SDI, USB မှတ် 3.0, IP ကို ​​Strea နှင့်အတူလေးဒယ်အိုး tilt zoom ကိုကင်မရာများပါဝင်ပါသည်
PTZOptics: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @touchstreamedia
အယူအဆကနေပြီးစီးရန်, Touchstream များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်အတွက်စေ့စပ်ထားပြီး
Touchstream: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @touchstreamedia
2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံလွှင့် Pix ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုဖန်တီးတဲ့ဘော်စတွန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် switc
ထုတ်လွှင့် Pix: အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow
အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar လုပ်ဆောင်ခြင်း Beat နှင့် LumaForge ငါးဖန်ခွက်စားသုံးခြင်း၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်
လုပ်ဆောင်ခြင်း amp; ခြုံငုံသုံးသပ်ရန်: LumaForge ငါးဖန်ခွက်
ယနေ့့ထုတ်ကုန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များတွင် Troy LiveU ့တစ်ကိုယ်တော် device ကိုထုတ် check လုပ်ပေးပါတယ်။ အဆိုပါ LiveU တစ်ကိုယ်တော်ကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာ
PRODUCT မှခြုံငုံသုံးသပ်ရန်: LiveU တစ်ကိုယ်တော်
TAG VS ဆန်းသစ်သော IP ကိုစောင့်ကြည့် High Quality မြင်ကွင်းစုံ Solutions အတွက်အထူးပြုသည်။ သူတို့ရဲ့ uniq
TAG NAB Show ကို New York မြို့မှာဗီဒီယိုစနစ်များ
Broadfield စာ Inc ကဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှု equ ၏ဦးဆောင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့
Broadfield စာအကြို #NABShowNY အင်တာဗျူး
ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာနားလည်ခြင်းပဲ element တွေကိုဖော်ထုတ်မယ်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ Metaliquid s ကိုအာရုံကြောအသားတင် ba
#BroadcastAsia မှာ Metaliquid ဟန်ပြ AI အနည်းပညာ
ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့် dat ၏ KRONOS အကွာအဝေး၏ဆိုက်ရောက်နှင့်အတူ Bluefish444 ၏မျိုးဆက်သစ်,
@Bluefish444 #39; စင်္ကာပူမှာ #BroadcastAsia 2018 မှာ s ကို Kronos Card ကို
အဆိုပါ Ultrix 12G Router တစ်ခုအံ့သြဖွယ်လမ်းကြောင်း, မြင်ကွင်းစုံများနှင့်လုံးအတှကျအဆစ်ဂနယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်
Ross ကဗီဒီယို #39; စင်္ကာပူမှာ #BroadcastAsia 2018 မှာ s ကို Ultrix ။ @Ross_Video
Axel နည်းပညာစတီဖာနို Grego ရေဒီယို Playo အကြောင်းကို Beat အသံလွှင့်များ၏မိုက်ကယ်ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူပြောတတ်
ရေဒီယို amp များအတွက် Axel နည်းပညာဆွေးနွေးပွဲအသံပလေးအောက်; #BroadcastAsia မှာ podcasting
Plura အသံလွှင့်၏ ray Kalo စင်္ကာပူအတွက် 2018 BroadcastAsia Show မှာရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
Plura အသံလွှင့် #39; #BroadcastAsia 2018 @plurabroadcast မှာ s ကို Ray Kalo
Anevia s ကိုဂရက်ဂိုရီရှံဆုန်သည်အဆိုပါ 2018 BroadcastAsia S ကိုမှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏မိုက်ကယ်ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
#BroadcastAsia 2018 မှာ Anevia
Sony က၏ဒန်နီ Sze သိန်အတွက် 2018 BroadcastAsia Show မှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
#BroadcastAsia 2018 မှာ Sony က
Solid State Logic (SSL) ကို၏အန်သိုနီ Gofton အဆိုပါ 2018 B ကိုမှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
#BroadcastAsia 2018 မှာအစိုင်အခဲပြည်နယ် Logic
ပွင့်လင်းအသံလွှင့်စနစ်များ၏ Kieran Kunhya အဆိုပါ 2018 BroadcastA မှာသူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုချက်တင်ထိုင်
Kathrein ၏ Joerg Lippert က S အတွက် 2018 BroadcastAsia ပြရန်ကာလအတွင်းဂီယာတာဝါတိုင်တွေအကြောင်းချက်တင်ထိုင်
BroadcastAsia မှာ Kathrein ဆွေးနွေးပွဲဂီယာမျှော်စင်
LiveU ၏ Ronan Artman စဉ့်ကိုင်အတွက် 2018 BroadcastAsia Show မှာထုတ်လွှင့် Beat ကနေရိုင်ယန်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အဆိုပါ 2018 BroadcastAsia Show မှာ LiveU
အသံလွှင့်များ၏မိုက်ကယ် rad အတွက်အလိုအလျောက်အကြောင်းကို Beat တွေနဲ့ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ၏မိုက် Powell ချက်တင်ထိုင်
အဆိုပါ 2018 BroadcastAsia Show မှာ RCS
တိရစ္ဆာန်ရုံဒစ်ဂျစ်တယ်၏ Syed Ahmed ကစင်္ကာပူအတွက် 2018 BroadcastAsia Show မှာထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်။
စင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia မှာ Zoo ဒစ်ဂျစ်တယ်
Panasonic က၏ Wilfred Yap အဆိုပါ 2018 BroadcastAsi မှာထုတ်လွှင့် Beat ကနေမိုက်ကယ်ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အဆိုပါ 2018 BroadcastAsia Show မှာ Panasonic က
t ကိုမှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏မိုက်ကယ်ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူလှသောလူကြိုက်များ Yellowtec ချတ်၏အန်ဒီ Mikutta
အသံလွှင့်အတူ Yellowtec ချတ်ယင်း 2018 BroadcastAsia Show မှာ Beat
ARRI ၏သြဂတ်စဖြစ်သောချုံကောင်းသည့် 2018 BroadcastAsi မှာထုတ်လွှင့် Beat ကနေမိုက်ကယ်ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အဆိုပါ 2018 BroadcastAsia Show မှာ ARRI
BirdDog ၏ဒန် Miall သိန်အတွက် 2018 BroadcastAsia Show မှာထုတ်လွှင့် Beat ကနေမိုက်ကယ်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
စင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia မှာ BirdDog
အသံလွှင့်များ၏မိုက်ကယ်နှင့်အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူချတ်ဒါဝိဒ်အလက်ဇန္ဒား 2018 BroadcastAsia Show မှာ Beat
BroadcastAsia 2018 မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ
SMPTE ဂျွန် Maizels အတွက် 2018 BroadcastAsia ရှိုးမှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
စင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia မှာ SMPTE ။ #BroadcastAsia @BroadcastAsia
ဖာဒီနန် Stoer စဉ့်ကိုင်အတွက် 2018 BroadcastAsia Show မှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
စင်္ကာပူအတွက် 2018 BroadcastAsia ရှိုးမှာ NewTek
မြက်ချိုင့်၏ Marcel Satiawan စင်္ကာပူမှာထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်။
စင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia မှာမြက်ချိုင့်
ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို (ဝါရှင်တန်ဒီစီမျြးအခနျးကွီး) တှငျအမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်ဖွင့်လှစ် #GALSNGEAR ၏ရည်မှန်းချက်, သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ #GalsNGear
MAGEWELL ၏မိုက်နန်းကသူတို့၏အကြောင်းဆွေးနွေးမှုအတွက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏မိုက်ကယ်ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ MAGEWELL ။ @Magewellcn @NABShow
ဒါဟာပါ! အဆိုပါ 2018 NAB Show ကိုကျော်ဖြစ်ပြီးယခုဖြစ်သူကတီထွင်တဲ့နည်းပညာကိုစတင်သုံးစွဲဖို့အချိန်မယ့်
Quote; အဆိုပါဘိ quote; ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း #5 ရိုင်ယန် #39; NAB ပြရန်၏ထိပ်တန်းငါးခု s! #NABShow @NABShow
Quote; အဆိုပါဘိ quote; ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း #4 2018 NAB ပြရန်။ #NABShow @NABShow
Quote; အဆိုပါဘိ quote; ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း #3 2018 NAB ပြရန်။ #NABShow @NABShow
Quote; အဆိုပါဘိ quote; ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း #2 2018 NAB ပြရန်။ #NABShow @NABShow
အဆိုပါဘိ၏ဤဇာတ်လမ်းပိုင်းမှာတော့ရိုင်ယန် Salazar ရုံကြိမ်မြောက်မတိုင်မီတနင်္ဂနွေပေါ်တွင် 2018 NAB Show ကိုကြမ်းပြင်တာမျိုး
Quote; အဆိုပါဘိ quote; ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း #1 2018 NAB ပြရန်။ #NABShow @NABShow
အကျယ်ချဲ့ Duchinsky, နယ်မြေတွေကိုအရောင်း Manager ကိုတစ်ဦး 2.6 မီလီမီတာ x ကိုရူပါရုံကို့ကြောင်းသစ်ကို LED က Panel ကိုဆြေးြေိံး
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Theatrixx Technologies က။ @NABShow
Wisabi သူတို့မည်သူမဆိုထက်ပိုကောင်းထိုသို့ပြုတဲ့ cloud storage နှင့်ပြည်နယ်ပါ! ဒါဝိဒ်သည်မိတျဆှေ, Wasa ၏ CEO
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Wisabi ။ @NABShow
Rotolight ပြပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးအနိုင်ရခဲ့ခြင်းနှင့်သူတို့ကလူတန်းစားအတွက်တောက်ပအလင်းအိမ်၏တဦးတည်းရှိသည်! လှံတံကိုအာရုန် Gammo
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Rotolight ။ @NABShow
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များတစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရှိနေခြင်းနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ တွမ် Gittins, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Commercia
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ။ @NABShow
ဂယ်ရီရို, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်း၏ VP အတူ Pliant နည်းပညာ Pliant ကမ်းလှမ်းမှုထုတ်လွှင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်နှင့်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Pliant ။ @NABShow
Frame က IO ကိုဗီဒီယိုဖန်တီးမှုတစ်ခုအမှန်တကယ်အချိန်ပူးပေါင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် tool ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ CEO ဖြစ်သူ Emery ဝဲလ် te
Frame ကအဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ IO ။ @NABShow
Bryce Button လေး, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာကသူတို့2ဆင်နွှဲဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Aja ။ @NABShow
မိုက်ကယ် Dosch, Lawo ရေဒီယိုထုတ်ကုန်များအတွက်ကုန်ပစ္စည်း Manager ကို Lawo ရေဒီယို console ကိုကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်။ Lawo
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Lawo ရေဒီယိုကုန်ပစ္စည်းများ။ @NABShow
2018 NABShow, Phabrix တဆယ်လေးနှစ်လွန်မှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း, Phabrix ထုတ်လွှင့် t ကိုတစ်ဦးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Phabrix ။ @NABShow
Fortium အကြောင်းအရာ encryption ကိုအထူးပြုနှင့်ကြိုတင်ဖြန့်ချိအဆင့်တွင်အထူးပြု။ Mathew Gilliat
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Fortium ။ @NABShow
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ် Gates သည် Air ကိုမှတ်တမ်းတစ်ခုအတိုချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးခြင်း Rich Redmond နှင့်အတူ LIVE NABShow
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Gates ကလေတပ်။ @NABShow
ဂျေး Batista, အမေရိကန်စစ်ဆင်ရေးမှ General Manager နှင့်အတူ NABShow တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးမှာ Tedial ။ Tedial ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Tedial ။ @NABShow
Brightcove ဘို့သူ Mike Green ကစျေးကွက်၏ VP နှင့် Business ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအင်တာဗျူးစိတ်လှုပ်ရှား! Brightc
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Brightcove ။ @NABShow
Dektec ပိုပြီး SP ပေးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်သူကို Stephane Billet နှင့်အတူ NABShow တိုက်ရိုက်မှာ Dektec အင်တာဗျူး
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Dektec ။ @NABShow
အဆိုပါ 2018 NABShow မှာပြ Zixi ခေါင်းဆောင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး streaming ဖြစ်ပါတယ်။ အဲရစ် Bol နှင့်အတူအင်တာဗျူး
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Zixi ။ @NABShow
အဆိုပါ 2018 NABShow တိုက်ရိုက် Quobyte ၏ Bjorn Kolbeck, Co. , တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအာရုံစိုက်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Quobyte ။ @NABShow
Will ရေ, IP ကိုမဟာဗျူဟာ၏ဒါရိုက်တာနှင့်အတူ NABShow တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးမှာ Newtek ။ Newtek ခေါင်းဆောင်ရှိပါတယ်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Newtek ။ @NABShow
လာရီအို Connor, OWC ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူနှင့်အတူ NABShow 2018 အင်တာဗျူး Mak မှထုတ်ကုန်များကိုပြနေသည်
အဆိုပါ 2018 NABShow မှာ OWC ။ @NABShow
သူ Mike ဝမ်းနည်းပူဆွေး, Ncam Technologies က၏ CCO နှင့်အတူ NABShow 2018 အင်တာဗျူး။ Ncam Technologies က showcasin ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Ncam ။ @NABShow
အဆိုပါကားအရောင်းပြခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ Cuescript နှင့်အတူ LIVE NABShow! Cuescript များအတွက်ပွင့်လင်းဂီယာကဒ် premiering ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာ Cuescript ။ @NABShow
YourOwnTV #39; အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် s ကို Ron ဗန် Herk
Kiswe မိုဘိုင်း၏ Wim Sweldens ကြိုတင် NAB Show ကိုဗီဒီယိုကအင်တာဗျူးများတွင်ထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်။
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Kiswe မိုဘိုင်း။ @KisweMobile #NABShow
Dell က EMC ခေတ်သစ်ဒေတာစင်တာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ၏ CTO
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Dell က EMC ။ @DellEMC
GatesAir ၏ကြွယ်ဝသော Redmond ကြိုတင် NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အတူချက်တင်ထိုင်။ GatesAir ကို arc
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် GatesAir
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကို formats ဗီဒီယိုဖြန့်ချိ၏ပြောင်းလဲခြင်း, နှင့်ဗီဒီယိုအဆက်၏ပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူ
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် igolgi ။ #NABShow
Fuugo OTT စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဦး၏ 10 နှစ်ကျော်ရှိ
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Fuugo ။ @FuugoTV #NABShow
Dielectric အဖြစ်ဝေးပြန် 1942 အဖြစ်အမြစ်များနှင့်တကွ, ထုတ်လွှင့်အသက်အရွယ်ရှေ့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်တည်းခိုခန်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ drive ကို
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Dielectric ။ #NABShow @Dielectric_LLC
Camstreamer, YouTube ကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုစီးမယ့် streaming များ application ဖြစ်ပါတယ် Facebook နှင့်
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် CamStreamer ။ #NABShow @CamStreamer
25 နှစျကျြောကုန်ပစ္စည်းများ Inc က္တရအဘို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဆော့ဖျဝဲ application များအတွက်အထူးပြုထားပါတယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများဆိုပါစို့။ #NABShow @imagineproducts
Witbe ၏လု Carrier ကြိုတင် NAB Show ကိုဗီဒီယိုကအင်တာဗျူးအတွက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အတူချက်တင်ထိုင်။ next ကို Generatio
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Witbe ။ #NABShow @Witbe
Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား (P | PW) content တွေကိုဖန်တီးသူနှင့် desig များအတွက်ကမ္ဘာကြီး s ကိုဦးဆောင်လေ့ကျင့်ရေးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက်အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts ။ #NABShow
Pliant Technologies ကကြိုတင် NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးနှင့်ကြိမ်မြောက်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုများအတွက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အတူချက်တင်ထိုင်
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Pliant ၏ဂယ်ရီရို။ #NABShow @4Pliant
NAB ပြရန်နှင့်အတူ Qligent ချတ်အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးတွင်နေထိုင်ကြသည်။ #NABShow @Qligent
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များအလိုအလျောက်တစ် box ထဲမှာရုပ်သံလိုင်းနှင့်အဆက်၏ဦးဆောင်ပြုစုသူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ။ #NABShow @PebbleUpdates
2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Amagi ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားမိုဃ်းတိမ်၌ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Amagi
Klover ထုတ်ကုန်များ, Inc ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူရှင်ပေါလု Terpstra နှင့်ပက်ထရစ် Santini အားဖြင့် 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Klover ကုန်ပစ္စည်းများ။ #NABShow #
VerbIT ကြီးမားသော s ကိုကိုင်တွယ်ရန်စတင်ထံမှ finish ကိုမှဒီဇိုင်းထုတ်ကူးယူခြင်းနှင့်စာတန်းထိုးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် VerbIT ။ @Verbit_ @NABShow #NABShow
ထုတ်လွှင့် Beat NewTek အားဖြင့်အသစ်သော TriCaster TC1 သုံးသပ်ပြီး။ ဆုံးပြီးပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကအောငျမွ
အသံလွှင့် Beat အားဖြင့် TriCaster TC1 ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို
အသံလွှင့်မှတ်တမ်းတင်, မွန်: Actus ဒစ်ဂျစ်တယ်ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်မီဒီယာများအတွက်အသိဉာဏ်ပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေး
အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးအတွက် Actus ဒစ်ဂျစ်တယ်။ #NABShow @actusdigitaltm
30 နှစ်ကျော်အဘို့, မာရှယ်အသံ, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဗီဒီယိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောပံ့ပိုးပေးခဲ့
မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @marshallusa
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်နှင့်အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူ Avid ချတ်ဒ Keli Callaghan အဆိုပါ upco အကြောင်းကို Beat
အဆင့်မြင့်ရပ်စနစ်များ™ Triad Orbit: TRIAD Orbital ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုကွမ်တမ်ခုန်ကိုယ်စားပြုတယ်
Triad စနစ်များ 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုအင်တာဗျူး Orbital ။ #NABShow @NABShow @Triad_Orbit
အဆိုပါပြောင်းလဲမည်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော, ဖောက်သည်ထိန်းချုပ်ထားရုပ်မြင်သံကြား signal ကို r ကိုပေး 1991 အတွက်ဖန်တီးခဲ့
အဆိုပါပြောင်းလဲမည် 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @TheSWITCHTV
EiTV software ကိုဖွံ့ဖြိုးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စားသုံးသူရွေးကောက်ခံ၏စျေးကွက်အတွက်အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်
EiTV 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @eitvent
Wohler Technologies ကစက်မှုလုပ်ငန်း s ကိုပထမဦးဆုံး၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူ 30 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်ပိုထွက်စတင်
Wohler 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @Wohler
Lectrosonics နယူး Mexi အခြေစိုက်အလွန်လူကြိုက်များကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း transmitter ကို / လက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Lectrosonics 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @Lectrosonics
အဆိုပါ MOS2S စီမံကိန်း Consortium ၏ Karim က Dahdah ကြိုတင် NAB က S အတွက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်ထံမှမိုက်ကယ်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
MOS2S စီမံကိန်း Consortium အကြို NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @NABShow #NABShow @ITEA_MOS2S
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်, FLUOTEC, LightWarrior, CINELIGHT, ဒါရိုက်တာ, DP, နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ် NAB EA ၏
ဟိုဆေးမာရီယာ Noriega အကြို 2018 NAB Show ကိုပြသခဲ့သည်အင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @JoseMNoriega @Fluotec
Broadfield စာ 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @BroadfieldSales
NAB ပြရန်နှင့်အတူမီဒီယာချတ်တွင်အမှတ်တရ၏ဂျင်းချားလ်စ် Rigot သူတို့၏အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြသဆွေးနွေးမှုအတွက် LIVE
မီဒီယာ 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုအင်တာဗျူးတွင်က Wall ။ #NABShow @NABShow
Tedial တိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက် (မီဒီယာနှင့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး) ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးဖြစ်ပါတယ်
Tedial 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @Tedia_MediaIT
Facilis ပေါင်းစုံပလက်ဖောင်း shared ဖိုင်စနစ်နှင့်ဖြည့်စွတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပါဝါထောင်ပေါင်းများစွာဏ
Facilis နည်းပညာ 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @Facilis
အဆိုပါအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံနီးပါး2ဆယ်စုနှစ်နှင့်အတူ SNEWS s ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
အကြို 2018 #NABShow ဆွေးနွေးချက်အတွက် SNews ၏ဧလျေဇာ Reis ။ @NABShow @snews
Bittree ကိုeမှအရည်အသွေးမြင့် patch စနစ်များကိုပေး၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ 1978 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
Bittree ၏ Ari Baron တစ်အကြို @NABShow အင်တာဗျူးအတွက် #NABShow တိုက်ရိုက်အတူချက်တင်ထိုင်။ @BittreePatchbay
Caringo အဆိုပါ gro ကနေ software ကိုဒီဇိုင်းအားဖြင့်သိုလှောင်မှုဘောဂဗေဒပြောင်းလဲပစ်ရန် 2005 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်
အကြို #NABShow ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာသိုလှောင် Solutions အပေါ် Caringo ၏ Adrian Herrera ။ @NABShow @CaringoStorage
Google မှာထိပ်စက်သင်ယူမှု personalization အသင်းတွေထဲကမွေးဖွားခဲ့ပြီး en မှ LiftIgniter ့မစ်ရှင်
အကြို #NABShow ဆွေးနွေးချက်အတွက် @LiftIgniter ၏အာဒံကို Spector ။ @NABShow
StoryTech immersive ၏ဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ကြိုတင် 2018 NA အတွက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
တစ်အကြို #NABShow ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst ။ @NABShow @StoryTech
ကိုရှာကမ္ဘာကြီးကို s ကိုပထမဦးဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ easil မှဖန်တီးသူလုပ်ပိုင်ခွင့်
#39 ရှာကြလော့ Jon Cheney 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုအင်တာဗျူး့။ #NABShow @NABShow @seekadventureap
FileCatalyst နည်းပညာ Unlimi Tech မှ Software များ Inc ကို, ကမ္ဘာ LEA အနိုင်ရတဲ့သူဟာ Emmy ဆုအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်
Filecatalyst 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @Filecatalyst
Web ကိုများအတွက် Bitmovin (YC S15) ဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အအုံ | အစာရှောင်ခြင်းတိမ်တိုက် Encoding | HTML5 အလိုက် Streami
Bitmovin 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @Bitmovin
AlertMe ၏အာဒံကို Shapiro အဆိုပါ 2018 NAB Show ကိုပရိသတျနဲ့သူ့ရဲ့နည်းပညာကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ကရှင်းပြသည်,fကိုအသုံးပြုသည်
AlertMe 2018 NAB ပြရန်, အကြို Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow
ဂျိုး Sanginario နှင့် Greg Ciaccio SMPTE 2017 မှာကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ chatting ။
ဂျိုး Sanginario နှင့် [RE] DESIGN Group မှ #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ Greg Ciaccio
ဆမ် Bogosh ai SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာအသစ်ဝင်ရိုးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
ရိုး ai #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ဆမ် Bogosh
Keith Lissak Quantum SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏အဘယျသို့သတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
Quantum #SMPTE2017 ၏ Keith Lissak @smpteconnect
မာရီယို Blandini SwiftStack SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏အဘယျသို့သတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
SwiftStack #SMPTE2017 ၏မာရီယို Blandini @smpteconnect
Pat Griffis, ဘာဘရာ Lang နဲ့မဿဲ Goldman အဆိုပါ SMPTE ၏တိုးတက်မှုနှင့်ကြိုတင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အတူစကားပြော
Pat Griffis, ဘာဘရာ Lang နှင့် SMPTE #SMPTE2017 @smpteconnect မဿဲ Goldman
SMPTE 2017 မှာကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ chatting ဒါဝိဒ်သည် Reisner ။
ASC #SMPTE2017 ဒါဝိဒ် Reisner @smpteconnect
ဖောရက်စ Sussman Lawo SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏အဘယျသို့သတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
Lawo #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ဖောရက်စ Sussman
ပက်ထရစ် Howley DCIMpro SMPTE 2017 မှာတတ်၏အဘယျသို့သတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
DCIMpro #SMPTE2017 ၏ပက်ထရစ် Howley @smpteconnect
Howard Lukk, အလန် Lambshead နှင့်ဘရုစ် Devlin သစ်ကိုနည်းပညာ SMPT မှာပြသလျက်ရှိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ
Howard Lukk, အလန် Lambshead နှင့် SMPTE #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ဘရုစ် Devlin
Ramon အဘိဓါန် Breton- နဲ့ Tom အဖြူရောင် 3rd ငါ QC SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏အဘယျသို့သတင်းပြောပြပါ။
3rd ငါ QC #SMPTE2017 ၏ Ramon အဘိဓါန် Breton- နဲ့ Tom အဖြူရောင် @smpteconnect
ဒင်းလိုင်ယွန်စည်းသွက်ဂျက်ဇနည်းပညာ SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
စည်းသွက်ဂျက်ဇနည်းပညာ #SMPTE2017 ၏ဒင်းလိုင်ယွန် @smpteconnect
ဒါဝိဒ်သည် Sallak Panasas SMPTE 2017 မှာတတ်၏အဘယျသို့သတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
Panasas #SMPTE2017 ဒါဝိဒ် Sallak @smpteconnect
မာချီ၏ AutoDCP ၏ဘရိုင်ယန် Quandt, Bixly ၏နစ်ခ် Wortley နှင့် Shaun Novak သစ်ကို te အကြောင်းပြောဆို
ဘရိုင်ယန် Quandt (AutoDCP), နစ်ခ် Wortley (Bixly) နှင့် Shaun Novak (မာချီ) #SMPTE2017 @smpteconnect
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအန်ဒီ Donahue နှင့်သူ Carl ပီးလ်ရှယ်ယာသတင်း Killer သီချင်းများအချို့ SMPTE 2017 မှာတတ်၏။
Killer ၏အန်ဒီ Donahue နှင့်သူ Carl ပီးလ် #SMPTE2017 သီချင်းများ @smpteconnect
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ Mac က Moore ကရှယ်ယာသတင်းစပယ်ယာ Technologies က SMPTE 2017 မှာတတ်၏။
စပယ်ယာ Technologies က #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ Mac က Moore က
တွမ်ဆက်မက်ကာသီနှင့်ဘီလ် Baggelaar Sony က SMPTE 2017 မှာတတ်၏သတင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုပါ။
တွမ်ဆက်မက်ကာသီနှင့် Sony ရုပ်ပုံများ #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ဘီလ် Baggelaar
ယောသပ်သည် Goldstone သည့် Technicolor နှင့်အတူချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ် - SMPTE 2017 မှာဟားဘတ်တီ Kalmus တံဆိပ်။
ARRI #SMPTE2017 ယောသပ် Goldstone @smpteconnect
Randy Ubillos SMPTE 20 မှာလီယွန် Silverman ကကမကထပြုသည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များတံဆိပ်နှင့်အတူချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်
Randy Ubillos #SMPTE2017 @smpteconnect ။
မိုက်ကယ်အေ Isnardi SMPTE 2017 မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ယူခြင်းတံဆိပ်နှင့်အတူချီးမြှင့်သည်။
SRI ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ #SMPTE2017 @smpteconnect ၏မိုက်ကယ်အေ Isnardi
Dominic ဂျက်ဆင်နှင့် Giovanni Galvez Telestream SMP မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာအသစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ
Dominic ဂျက်ဆင်နှင့် Telestream #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ Giovanni Galvez
Reza Rassool RealNetworks SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာအသစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
RealNetworks #SMPTE2017 ၏ Reza Rassool @smpteconnect
Carllene Mowry ATTO SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းအရာကိုသတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
ATTO နည်းပညာ #SMPTE2017 ၏ Carllene Mowry @smpteconnect
TAG VS #SMPTE2017 @smpteconnect ၏အာဘေးက Zerbib
Troy Davis ကနှင့် Scott Barella Utah သိပ္ပံ SMPTE မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာအသစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ
Troy Davis ကနှင့် Utah သိပ္ပံ #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ဖြစ်သူ Scott Barella
တိ Conway သစ်ကိုနည်းပညာမြွေဆိုး SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
မြွေဆိုး #SMPTE2017 ၏တိ Conway @smpteconnect
ဖိလစ်ပီဆန်းတို့နှင့် Dave Euson Glookast SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏အဘယျသို့သတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဖိလစ်ပီဆန်းတို့နှင့် Glookast #SMPTE2017 @smpteconnect ၏ Dave Euson
အမ်မလီ Richards Haverford SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏နည်းပညာရှင်းပြသည်။
Haverford စနစ်များ #SMPTE2017 @smpteconnect ၏အမ်မလီ Richards
ဘာဘရာ Lang SMPTE s ကိုမိတ်သဟာယဖွဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
SMPTE #SMPTE2017 ၏ဘာဘရာ Lang @smpteconnect
ချားလ်စ် Meyer SMPTE 2017 အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မြက်ချိုင့် #SMPTE2017 ၏ချားလ်စ် Meyer @smpteconnect
ကဲန် Rudman Sohonet SMPTE 2017 မှဆောင်တတ်၏အဘယျသို့သတင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
Sohonet #SMPTE2017 ၏ ken Rudman @smpteconnect
ဘာဘရာ Lang SMPTE 2017 ၏ပထမနေ့၌ SMPTE HPA ကျောင်းသားများရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဘာဘရာ Lang SMPTE နှင့် HPA စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
နီးလ် Coleman SMPTE 2017 မှာ AI အအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
3 Ball ကို Entertainment က #SMPTE2017 ၏ Neil Coleman @smpteconnect
အင်ဒရူး Shulkind SMPTE 2017 မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဘယ်သို့သောအကြောင်းသူ၏အကြံအစည်ဝေမျှပေးသည်။
အင်ဒရူး Shulkind #SMPTE2017 @smpteconnect
SMPTE မှာမိမိအတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကို Corey Carbonara ဆွေးနွေးပွဲနှင့်သူ၏ကျောင်းသားတဦးတည်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ခြင်း aw ရှိခြင်း
Ninaad Kulkarni #SMPTE2017 @smpteconnect မှာမိမိရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ထုတ်လွှင့် Beat ကို Canon Burbank ၏ရန်းဖွင့်ပွဲဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ Professional ကနည်းပညာ
Canon ၏ Burbank: Facility ခရီးစဉ်
@ROSS_Video ၏အင်ဒရူးတန် # BroadcastAsia2017 မှာထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်။
#BroadcastAsia2017 မှာ @ROSS_Video ၏အင်ဒရူး Tan က
ထုတ်လွှင့်ဘိ် Jaimi အလက်ဇန္ဒား #BroadcastAsia2017 မှာ @KALTURA ဒေါက်တာရှေးဒါဝိဒ်နှင့်ချက်တင်ထိုင်။
#BroadcastAsia2017 မှာ @KALTURA ဒေါက်တာရှေးဒါဝိဒ်သည်
ထုတ်လွှင့်စင်္ကာပူမှာထုတ်လွှင့်အာရှ 2017 မှာ ATOMOS ၏, Mark Naidoo နှင့်အတူချတ် Beat ။
#BroadcastAsia2017 @Atomos_News မှာ ATOMOS ၏, Mark Naidoo
ထုတ်လွှင့် #BroadcastAsia2017 မှာ @VIZRT ၏မိုက်ကယ် Namatinia နှင့်အတူချတ် Beat ။
#BroadcastAsia2017 မှာ @VIZRT ၏မိုက်ကယ် Namatinia
အသံလွှင့်၏ Jaimi အလက်ဇန္ဒား #BroadcastAsi မှာ Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာများ၏တိ Felsted နှင့်အတူချတ် Beat
#BroadcastAsia2017 မှာ Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာများ၏တိ Felsted
ထုတ်လွှင့် #BroadcastAsia2017 မှာ avid ၏ Yew Jin က Cheong နှင့်အတူချတ် Beat ။
#BroadcastAsia2017 မှာ avid ၏ yew Jin က Cheong
ARRI ၏ဖိလိပ္ပု Vischer #BroadcastAsia2017 မှာထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်။
#BroadcastAsia2017 မှာ ARRI ၏ဖိလိပ္ပု Vischer ။ @ARRIChannel
ARRI ၏အန္န Binder စင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia မှာထုတ်လွှင့် Beat ကနေ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
BroadcastAsia မှာ ARRI ၏အန္န Binder ။ @ARRIChannel
အသံလွှင့်၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးစင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia မှာ ARRI နှင့်အတူချတ် Beat ။
စင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia မှာ ARRI ။ @ARRIChannel
2017 နေ့နာရီ 1 NAB ။
ရိုင်ယန် Salazar, Janet အနောက်နှင့် Jeanette De Patie နှင့်အတူအကြို NAB ကွိုဆိုပြရန်
2017 ကြာသပတေးနေ့နာရီ4NAB ။
2017 ကြာသပတေးနေ့နာရီ4NAB
2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာရီ6NAB ။
2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာရီ6NAB
2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာရီ2NAB ။
2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာရီ2NAB
2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာရီ5NAB ။
2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာရီ5NAB
2017 အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာနာရီ4NAB ။
2017 အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာနာရီ4NAB
2017 အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာနာရီ3NAB ။
2017 အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာနာရီ3NAB
2017 တနင်္လာနေ့နာရီ6NAB ။
2017 တနင်္လာနေ့နာရီ6NAB
2017 တနင်္လာနေ့နာရီ 1 NAB ။
2017 တနင်္လာနေ့နာရီ 1 NAB
NAB ပြရန်နှင့်အတူ Autoscript ချတ်ယင်း 2017 NAB Show မှာ LIVE ။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ @AutoscriptTV
Outsight အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာ Nikki Broeckelmann နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ Outsight
အဲရစ် Openshaw, Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များမှ General Manager ဟာ 2017 NAB မှာထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ Pebble Beach က
Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ s ကိုတိ Felstead အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#NABShow မှာ Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ
ကွမ်တမ့် Dave ဖရက်ဒရစ်ဟာ 2017 NAB Show မှာ Dave ဖရက်ဒရစ်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာကွမ်တမ်
CatDV အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာသူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုဝေမျှပေးသည်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ CatDV
Shotoku အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာသူတို့ရဲ့မကြာသေးခင်ကကြေညာချက်များဝေမျှပေးသည်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ Shotoku
Sonnet Technologies ကအဆိုပါ 2017 NAB Show မှာသူတို့ရဲ့မကြာသေးခင်ကကြေညာချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာ Sonnet Technologies က
စတူဒီယို Technologies ကဂေါ်ဒွန် K. Kapes NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာစတူဒီယို Technologies က
WCPMedia န်ဆောင်မှုများအတွက် 2017 NAB Show မှာထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်။
အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာ WCPMedia န်ဆောင်မှုများ
Divvycloud s ကိုပတေရုသဖြစ်သူ Scott ဟာ 2017 #NABShow မှာ၎င်းတို့၏နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ Divvycloud
တီဗီ s ကိုသောမတ်စ် Lind အဆိုပါ 2017 NABShow မှာသူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုမျှဝေပေါ်လာပါသည်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာတီဗီပေါ်လာ
အမရေိ Ferrera #NABShow မှာရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။ အမရေိ Ferrera (18 ဧပြီလ 1984 ဖွား) တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
အမရေိ Ferrera #NABShow မှာရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
DNF အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာထုတ်လွှင့် Beat နှင့်အတူချတ်ထိန်းချုပ်မည်။
DNF အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာထိန်းချုပ်မည်
Broadstream chats with Broadcast Beat at the 2017 #NABShow.
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ Broadstream
Morro မှာ Data s ကိုမိုက်ကယ် Clegg ဟာ 2017 NAB Show မှာ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ Nikki Broeckelmann နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
အဆိုပါ 2017 #NABShow မှာ Morro
Show ကိုတိုက်ရိုက် s ကို Jaimi အလက်ဇန္ဒား 2017 NAB Show မှာ Akamai s ကိုမိုက်ကယ် Fay နှင့်အတူချက်တင်ထိုင် NAB ။
Akamai #39 ၏ 2017 #NABShow မှာ s ကိုမိုက်ကယ် Fay
စတီဗင် Renata, VoiceQ ၏ CEO တစ်ဦးအကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက်ရိုင်ယန်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
အကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက် #NABShow နှင့်အတူ VoiceQ ချတ်များ
ဂျင်မ် McKenna, Facilis နည်းပညာဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးအကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက်ရိုင်ယန်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
အကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက် #NABShow တိုက်ရိုက်အတူ Facilis ချတ်များ
ယောဟနျသဗန် Wagner, Wildmoka မှာအရောင်းဌာနမှူးတစ်ဦးအကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက်ရိုင်ယန်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
အကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက် #NABShow တိုက်ရိုက်အတူ Wildmoka ချတ်များ
Scott Murray, Telestream မှာစျေးကွက်၏ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးအကြို NAB ပြရန် Interval အတွက်ရိုင်ယန်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက် #NABShow တိုက်ရိုက်အတူ Telestream ချတ်များ
ရှင်ပေါလု Babb, Maxon အမေရိကန်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူတစ်ဦးအကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက်ရိုင်ယန်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
တစ်အကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက် #NABShow တိုက်ရိုက်အတူ Maxon ချတ်များ
တစ်ဦးအတွက်ရိုင်ယန်နှင့်အတူရေ, NewTek မှာကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်အရောင်း Entertainment ကဒါရိုက်တာချတ်လိမ့်မည်
အကြို NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက် #NABShow တိုက်ရိုက်အတူ NewTek ချတ်များ
Tupelo Raycom ဂျွန် Servizzi သူတို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက် NAB ပြရန်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။ Tupel
Tupelo Raycom #39; အကြို #NABShow ဆွေးနွေးချက်အတွက် s ကိုယောဟနျသ Servizzi
လာမည့်မှာသူတို့ရဲ့ပြပွဲပတျဝနျးကငျြစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအကြောင်းကို Plura အသံလွှင့်ဆွေးနွေးပွဲ ray Kalo
တစ်အကြို NAB ပြရန်ဆွေးနွေးချက်အတွက် Plura အသံလွှင့်
Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာဒါဝိဒ် Tasker ကြိုတင် NAB ပြရန်ဃအတွက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အကြို #NABShow ဆွေးနွေးချက်အတွက် Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ။ @SnellAdvMedia
ဂျိုးဗာလစံ, Sony ကမှာ Professional ကမီဒီယာ၏အကြီးတန်း Marketing Manager NAB ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
ထုတ်လွှင့်ဘိသည့် 2017 NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်သည်။ 2016 တှငျကြှနျုပျတို့ 1.3 သန်းကိုလက်ခံရရှိ
Show ကိုတိုက်ရိုက် 2017 အရောင်းမြှင့် NAB
ရေ, NewTek များအတွက်ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်၏ညွှန်ကြားရေးမှူး MediaDS ကရှင်းပြသည်, N ကိုတို့ကပူးတွဲဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
NewTek amp; Wowza Launch MediaDS ကယ့်ကြင်နာရဲ့ Virtual CDN ၏ပထမဦးဆုံး
သင်နှစ်တွင်၏အကြီးမားဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းရှိုးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ကျနော်တို့ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော် Las Vegas မှကြိမ်မြောက်၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြည့်
2017 NAB Show ကိုပရိုမိုရှင်းမီဒီယာ။ Entertainment ။ နည်းပညာ
အသံလွှင့်၏ Lumens ပေါင်းစည်းရေးနှင့်ရိုင်ယန် Salazar ၏မိုက်ကယ် Scheibel Lumen s ကို 4K ဦးအကြောင်းကို chat Beat
NAB Show ကိုနယူးယောက် 2016 #NABShow မှာ Lumens ပေါင်းစည်းရေး၏မိုက်ကယ် Scheibel
အသံလွှင့်၏ Plura အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရိုင်ယန် Salazar ၏ ray Kalo အဆိုပါ Plura PBM 4K monito အကြောင်းကို chat Beat
NAB Show ကိုနယူးယောက် 2016 #NABShow မှာ Plura အသံလွှင့်၏ ray Kalo
Interra စနစ်များ၏ Ashish Basu နှင့်အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar တာမျှော်လင့်အကြောင်းကို chat Beat
Show ကိုနယူးယောက် NAB: Interra စနစ်များ #NABShow featuring အကြို Show ကိုလွှမ်းခြုံ
အသံလွှင့်၏ MultiDyne နှင့်ရိုင်ယန် Salazar ၏ဖရန့် Jachetta တာမျှော်လင့် EV အကြောင်းကို chat Beat
Show ကိုနယူးယောက် NAB: MultiDyne #NABShow featuring အကြို Show ကိုလွှမ်းခြုံ
အဆိုပါ 2016 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာ conference မှာရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူ Dell က EMC ဆွေးနွေးပွဲသောမတ်စ်ဘန်းရိုင်ယန် Sayre
သောမတ်စ်ဘန်း amp; #SMPTE2016 မှာ Dell က EMC ၏ရိုင်ယန် Sayre
Newtek ၏ Keycode မီဒီယာနှင့် Rex Olson ၏မိုက်ကယ် Kammes အဆိုပါ 2016 နှစ်ပတ်လည် T ကမှာရိုင်ယန် Salazar စကားပြော
Keycode မီဒီယာနှင့် #SMPTE2016 မှာ Newtek ၏ Rex Olson ၏မိုက်ကယ် Kammes
အဆိုပါ 2016 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာ Conf မှာ SMPTE s ကို Vista ကစီမံကိန်းနဲ့သူ့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းကိုဖူးအငုံထွက် Mayo အဘိဓါန်ဆွေးနွေးပွဲ
SMPTE #39 ဥက္ကဋ္ဌထူထောင်သူဖူးအငုံထွက် Mayo အဘိဓါန်, #SMPTE2016 မှာ s ကို Vista ကစီမံကိန်း
Sphericam နှင့်အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar ၏ဂျက်ဖရီမာတင် Sphericam ့နောက်ဆုံးပေါ်မြင့်မားသော en ဆွေးနွေးရန် Beat
Show ကိုနယူးယောက် NAB: Sphericam #NABShow featuring အကြို Show ကိုလွှမ်းခြုံ
ယောဟနျသအို Hurley မင်းသားနှင့် Host ကအဆိုပါ SMPTE Centennial Gala ့မီကပင်ရိုင်ယန်နှင့်အတူပြောတတ်
ယောဟနျသအို #39; #SMPTE2016 မှာ Hurley
ရစ်ချတ် Edlund ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆုချီးမြှင့်တင်ဆက်မှုအသံလွှင့် Beat du ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
#SMPTE2016 မှာရစ်ချတ် Edlund
SMPTE ၏ပတေရုသဃ Symes အသံလွှင့်စည်းချက်၏ Brooks သစ်တောနှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE 2016 မှာပတေရုသဃ Symes
SMPTE ၏ဘာဘရာ Lang အသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ SMPTE ၏ဘာဘရာ Lang
ကက်နက် yas, အသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar ယောဟန်ကိုအလန်ရှိမုနျကိုဘရတ် Jorgensen ချက်တင်။
ကက်နက် yas, Brad Jorgenson amp; #SMPTE မှာယောဟန်ကအလန်ကိုရှိမုနျ
avid ၏မိုက်ကယ်တစ်ဦးက Krulik အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ avid ၏မိုက်ကယ် Krulik
အီဒီအာမင် Tavana နှင့် Bluescape ၏, Matt Goodwin ကထုတ်လွှင့်စည်းချက်၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူ chat ။
အီဒီအာမင် Tavana amp; #SMPTE216 မှာ Bluescape ၏, Matt Goodwin
ဒေါက်ဂလပ် Trumbull အသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာဒေါက်ဂလပ် Trumbull
ဂျယ်ရီ Berger နဲ့ William Milne အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူ chat ။
#SMPTE2016 မှာဗီဒီယို Call Center ၏ဂျယ်ရီ Berger ဝီလျံ Milne
SSIMWAVE ၏ zhou ဝမ်အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ SSIMWAVE ၏ zhou ဝမ်
NGCODEC ၏ Oliver Gunasekara အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ NGCODEC ၏ Oliver Gunasekara
Dolby ဓာတ်ခွဲခန်းဒါဝိဒ် Brooks အသံလွှင့်စည်းချက်၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ Dolby ဓာတ်ခွဲခန်းဒါဝိဒ် Brooks
DZ Solutions ၏အဲရစ်သွန်မ်ဆင်အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ DZ Solutions ၏အဲရစ်သွန်မ်ဆင်
ပုံရိပ်၏ Manuel Hellendorff အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနှင့်အတူချတ်အရေးပါပါတယ်။
#SMPTE2016 မှာပုံရိပ်ကိစ်စရပျ Manuel Hellendorff
HELIOS ၏သောမတ်စ် Hallinan အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ HELIOS ၏သောမတ်စ် Hallinan
ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်၏ယေရှဲ Foster အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်၏ယေရှဲ Foster
Nextera ဗီဒီယို၏ Jed Deame အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ Nextera ဗီဒီယို၏ Jed Deame
အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူ Active ကိုသိုလှောင်ချတ်ဒအဲလ်ဘတ်စာရဲ။
#SMPTE2016 မှာ Active ကိုသိုလှောင်၏အဲလ်ဘတ်စာရဲ
Aja ၏အဲရစ် Norrell အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ Aja ၏အဲရစ် Norrell
IO စက်မှုလုပ်ငန်းများ, အာဒံ Little ကထုတ်လွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ IO စက်မှုလုပ်ငန်းများ, အာဒံ Little က
အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူ opendrives ချတ်၏ဂျက် McAlpin ။
#SMPTE2016 မှာ opendrives ၏ဂျက် McAlpin
Aspera ၏ Michelle Munson အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ Aspera ၏ Michelle Munson
SONY ၏ဂယ်ရီ Mandle, Dom Miuccio နှင့်မိုက်ကယ် Kovacevich အသံလွှင့်ခ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်
#SMPTE2016 မှာ SONY ၏ဂယ်ရီ Mandle
TVLogic ၏မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes Donahue အသံလွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ TVLogic ၏မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes Donahue
Telestream ၏ Dominic Jackson ကထုတ်လွှင့်ဘိ၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူချက်တင်ထိုင်။
#SMPTE2016 မှာ Telestream ၏ Dominic Jackson က
Mona လည်မျိုညှစ်, SMPTE အဖွဲ့ဝင်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los တစ်ဦးအတွက် SMPTE 2016 ကာလအတွင်းအသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချတ်များ
#SMPTE2016 မှာ Mona လည်မျိုညှစ်
Keith မှ Ian ဂရေဟမ်, #SMPTE အဖွဲ့ဝင်, L ကိုအတွက် SMPTE 2016 ကာလအတွင်းအသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချတ်များ
#SMPTE2016 မှာ Keith မှ Ian ဂရေဟမ်
Corey Carbonara, #SMP မှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူ Baylor တက္ကသိုလ်ချတ်များမှာပါမောက္ခ
#SMPTE2016 မှာ Corey Carbonara
မြွေဆိုး၏ Conn Dunning နှင့်အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar SMPTE s ကို standa ၏အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးရန် Beat
မြွေဆိုး Featuring SMPTE အကြိုပြပွဲ Coverage
Nevion ၏ယန္နေ T. Morstol နှင့်အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar SMPTE စက္ကန့၏အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးရန် Beat
Nevion featuring SMPTE အကြိုပြပွဲ Coverage
Arvato စနစ်များ၏ Eivind Sandstrand နှင့်ရိုင်ယန် Salazar Arvato Syst မှ SMPTE s ကိုပံ့ပိုးမှုများကိုဆွေးနွေးရန်
SMPTE အကြို Arvato စနစ်များနှင့်အတူလွှမ်းခြုံပြသ
ဝါရင့် Randy Faustino ဖော်စပ်သူကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်ကြောင့်ဆွေးနွေးရန်အသံလွှင့် Beat s ကိုရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူဆင်းထိုင်
အား NBC #39 များအတွက်ဂီတရောနှောအနိုင်ရရှိမှု Randy Faustino သူဟာ Emmy Award ဆု; The Voice ့
ဗိမာန်တော်၌အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုကိုစ NewTek TriCaster 860 ၏အောင်မြင်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုဆွေးနွေးခြင်း
လက်ပံ #39 ၏လက်ပံလေယာဉ်မှူးတက္ကသိုလ်; s ကိုဟိုဆေး Nevarez, တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးမှဒါရိုက်တာ
IBC ပြရန်ထံမှ NewTek တိုက်ရိုက်၏ဘရိုင်ယန် Olson!
ပေါ့ပါး, စတူဒီယိုနှင့်ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်ကင်မရာကိုထောကျပံ့ပစ္စည်း Vinten s ကိုကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်
Vinten #39; Vinten Vantage ၏ 2016 အကြို IBC ကြေညာချက်ထဲမှာ s ကိုဂျိမ်း Wilson က
2000 အတွက်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းရေးကတည်းက Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များအတွက် highl အတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှစိုက်ပျိုးထားပါတယ်
Pebble Beach တွင် System ကို #39; 2016 အကြို IBC ဆွေးနွေးချက်အတွက် s ကိုအဲရစ် Openshaw
အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar အဆိုပါ NewTek အိုင်ပီ Se ၏ပစ်လွှတ်အပေါ် NewTek ၏အင်တာဗျူးမည်ရေ Beat
ခြိုး NEWS: NewTek အဆိုပါ NewTek အိုင်ပီစီးရီးကြေညာ
Plura မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါင်းစုံ function ကိုမော်နီတာ၏ကျယ်ပြန့တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်
Plura အသံလွှင့် #39; အကြို IBC ဆွေးနွေးချက်အတွက် s ကို Ray Kalo
အကြို IBC ပြရန်ဆွေးနွေးချက်အတွက် Osprey ဗီဒီယို၏ Shelby စမစ်
အကြို IBC ပြရန်ဆွေးနွေးချက် #IBCShow အတွက်အသံဖုန်းများအတွက်ပေါလု Isaacs
OptiTrack ၏ဘရိုင်ယန် Nilles အသံလွှင့်၏ Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူပြောတတ်မှာ OptiTrack VR အကြောင်းကို Beat
SIGGRAPH 2016 မှာ OptiTrack ၏ဘရိုင်ယန် Nilles
ဂျော့ခ်ျဟူးဗား, SMPTE ၏အရှေ့ဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ဘရိုင်ယန် Claypool, SMPTE ဗဟိုဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
မဿဲ Goldman, SMPTE သမ္မတများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
SMPTE ၏နယူးယောက်တိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအတွက် Doug သက်သက်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ရစ်ချတ်ဝလေ, SMPTE ၏ပညာရေးဒုတိယသမ္မတများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
အင်ဒရူး Setos, SMPTE ၏ဟောလိဝုဒ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
NVIDIA ကနေ GPL Technologies က, မာကု Hirst ထံမှ Mechdyne နဲ့ Steve စပါးရိတ်ရာကာလမှသည် Devin Conn w စကားပြော
HGST / Western Digital ကမှာ Rameil Yaghoub မူလနည်းပညာဆိုင်ရာအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် Jaimi အလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူပြောတတ်
SIGGRAPH မှာ HGST / Western Digital က
70K UHD 4fps နှင့် 4P 30f: အဆိုပါ Lumens VC ကို A1080H အောက်ပါ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတစ် 60K PTZ ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်
4K အကြောင်း Lumens ပေါင်းစည်းရေးဆွေးနွေးပွဲ (VC ကို A70H) PTZ ကင်မရာများကို
ပတေရုသ Wharton, SMPTE အတွင်းရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးမှူးများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
BIG တောင်ပိုင်းညီလာခံ၏, Mark Bryant သူတို့ရဲ့ NewTek TriCaster နှင့် 3P အကြောင်းကိုထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်
NewTek အပေါ် BIG တောင်ပိုင်းညီလာခံ၏, Mark Bryant
ရှင်ပေါလု Terpstra 2016CineGear မှာ parabolic မိုက်ခရိုဖုန်းအကြောင်းကို Nikki မှ Klover ကုန်ပစ္စည်းများ Inc မှဆွေးနွေးပွဲကနေ
#2016CineGearExpoLA မှာ Klover ကုန်ပစ္စည်းများ Inc မှကနေရှင်ပေါလု Terpstra
, G နည်းပညာထဲကနေ Nitin Kachhwaha မြန်နှုန်းမြင့်သိုလှောင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ Atomos partne အကြောင်းကို Jaimi မှပြောသွား
Nitin Kachhwaha, G နည်းပညာ #2016CineGearExpoLA
Aladdin အလင်းများကနေအန်ဒ Kurtz #2016CineGearE မှာပြားချပ်ချပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလင်းပြားအကြောင်းကို Jaimi မှပြောသွား
အန်ဒ Kurtz Dedotec Schweitz #2016CineGearExpoLA
2016 မှာ Anton Bauer နဲ့ Litepanels Cine အလင်းအိမ်အကြောင်းကို Litepanels ဆွေးနွေးပွဲကနေ Jamie မှအလန် Ipakchian
အလန် Ipakchian Litepanels #2016CineGearExpoLA
2016CineGe မှာမိမိထုတ်ကုန် SteadiPod အကြောင်းကို Nikki မှအက်ဒီဘာဘာဗီဒီယိုကုန်ပစ္စည်းများ Eddie ဘာဘာဆွေးနွေးပွဲတွေ
Eddie ဘာဘာဗီဒီယိုကုန်ပစ္စည်းများ #2016CineGearExpoLA
B ကိုမှာအသစ်က SSL ကို console ကိုစနစ် T ကအကြောင်းကိုရိုင်ယန် Salazar မှ Solid State Logic ဆွေးနွေးပွဲအန်သိုနီ Gofton
#BroadcastAsia2016 မှာ Solid State Logic ၏အန်သိုနီ Gofton
သူတို့ရဲ့ PBM LCM စီးရီး 4K UHD မော်နီတာအကြောင်းကိုရိုင်ယန် Salazar မှ ray Kalo နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ CEO, Plura ဆွေးနွေးပွဲ
#BroadcastAsia2016 မှာ Plura ထံမှ ray Kalo
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အဘို့အ LiveTouch လူမျိုးများအားကုလ 4k ခလုတ်တွေအကြောင်းရိုင်ယန် Salazar မှဆမ်ဆွေးနွေးပွဲကနေတိ Felstead
#BroadcastAsia2016 အပိုင်း 1 မှာ SAM ကိုထံမှတိ Felstead
#Broadc မှာ LiveTouch စတူဒီယိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်ပြန်ဖွင့်အကြောင်းကိုဆမ်ဆွေးနွေးပွဲကနေရိုင်ယန် Salazar တိ Felstead
#BroadcastAsia2016 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း2မှာ SAM ကိုထံမှတိ Felstead
အာရုန်သည် Ng သည် #BroadcastAsia မှာကို Canon EOS C300 Mark II နှင့် ပတ်သက်. ရိုင်ယန် Salazar ဖို့ကို Canon အာရှဆွေးနွေးပွဲကနေ
#BroadcastAsia300 မှာကို Canon EOS C2016 Mark II
Riedel ၏ကင်မရွန်အို Neill ဒါရိုက်တာ soluti networking Smartpanel ဖိုင်ဘာအကြောင်းကိုရိုင်ယန် Salazar မှပြောသွား
#BroadcastAsia 2016 မှာ Riedel
ချာလီ Vogt အိုင်ပီနဲ့ထုတ်လွှင့်က de ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. ရိုင်ယန် Salazar မှဆက်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမြင်ယောင်ကြည့်
#BroadcastAsia 2016 မှာဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
Osprey ဗီဒီယို၏ Shelby စမစ်
NAB Show မှာ Qligent
NAB Show မှာ CueScript ၏မိုက်ကယ် Accardi
LAWO #39; NAB Show မှာ s ကိုဒွန်ငှက်
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် #39 နှင့်အတူ SH // FT ချတ်ဒ Jenn Duong; s ကိုဘရိုင်ယန်ရှေ Hurst
Plura အသံလွှင့်၏ ray Kalo 10 တစ်နှစ်တာရာပြည့်အခမ်းအနားဆင်နွှဲ!
NAB Show မှာ FileCatalyst
Show ကိုတိုက်ရိုက် NAB: Killer တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး amp သီချင်းများ; performance
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: ဗီဒီယို Switching
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: Animation ရဲ့ Software များ
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: ကျောင်းများအတွက်အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှု 101
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: ဘော့ Woodruff, ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Service ကိုဆုချီးမြှင့် Inductee NAB
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: Show ကိုထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Up ကို amp; ကျနော်တို့စောအေးမြသောအရာ!
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: ရေဒီယိုလွှ
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: တိုက်ရိုက်လွှ
အဘယ်မှာရှိအဆိုပါအသံလွှင့်စက်မှုလက်မှုဦးခေါင်း: Show ကိုတိုက်ရိုက် NAB?
ချက်ပြုတ် #NABSHOW 2016 ကိုကြည့်
အဆိုပါ 2016 NAB Show မှာ JVC နှင့်အတူ Air ကိုကျော်အိုင်ပီတွင်
2016 NAB Show မှာ Masstech တီထွင်
တိုက်ရိုက်လွှ NAB 2016 မှာမိုဃ်းတိမ်ကိုမှ streaming ဂရစ်ဖစ်ပေါ် PixelPower
ဒေါက်တာယောလ Myers တည်ထောင်သူသမ္မတ amp; ဥက္ကဋ္ဌ, NAB 2016 မှာ AccuWeather
ဆိုင်ရာ Francois Quereuil အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ, Nikki Broeck နှင့်အတူ Aspera ချတ်ဒ Worldwide မှစျေးကွက်ဒါရိုက်တာ
အဆိုပါ 2016 NAB Show မှာ Aspera
ray Kalo နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူ Plura #NAB
ရာသီဥတု protected #NAB ချာလီ Collias အကြီးတန်း VP, Zylight အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကကင်မရာအလင်း။
#NAB ယောရှုသည် Rush, Audinate, Dante အသံကွန်ရက်။
#NAB အင်ဒရူးရပ်ကွက်, Cinegy 8K!
#NAB ရီကာဒို Montesa CEO ဖြစ်သူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ
Dugan Automixing NAB 688 မှာအသံဖုန်းများအတွက်မှာ 2016 ရောနှောများအတွက်မိတ်ဆက်။ ဒါ့အပြင် Jon Tatooles ဆွေးနွေးပွဲ
Jon Tatooles အသံဖုန်းများအတွက် #NAB
ရိုင်ယန် Salazar Blackmagic s ကိုစတူဒီယို Ursa Viewfinder အကြောင်းကိုရိုင်ယန် Kendall နှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Blackmagic #39; s ကိုစတူဒီယို Ursa Viewfinder #NAB
Bronwyn Lewis ကသူမ၏ကို Adobe အတွက်တိုးနှင့် industr စိတ်ဝင်စားမိန်းမတို့အဘို့အကွံဉာဏျအကြောင်းကိုပြောသွား
Adobe က #NAB နှင့်အတူသူမ၏ Start ကိုအကြောင်း GalsNGear Bronwyn Lewis ကဆွေးနွေးပွဲ
ခရစ္စ Steel Jillian အာနိုး, အလွတ်တန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒေသခံ 695 နှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ Jillia
#NABShow မှာ #GalsNGear CS Jillain အာနိုး
Stefanie Mullen, ပြံ့နှံ့ဒီဇိုင်း၏ CFO, အ indust အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပွဲ
ပြံ့နှံ့ဒီဇိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့်အတူ #GalsNGear Stefanie Mullen #NAB မှာ Live
ကြွယ်ဝသောဝလေနှင့်ပက်ထရစ် Griffis အင်တာဗျူး #NAB
Howard Lukk နှင့်ပေတရု Symes အင်တာဗျူး။
Howard Lukk နှင့်ပေတရု Symes အင်တာဗျူး #NAB
ဘာဘရာ Lang အင်တာဗျူး။
ဘာဘရာ Lang အင်တာဗျူး #NAB
ထုတ်လွှင့်ဒေါက်ဂလပ် Trumbull နှင့်အတူ Janet အနောက်အားဖြင့်အင်တာဗျူး Beat ။
2016 NAB Show မှာဒေါက်ဂလပ် Trumbull အင်တာဗျူး
TSL ထုတ်ကုန်များ၏ Pieter Schillebeeckx ယင်းထုတ်လွှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျမိမိတို့၏ကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ TSL P ကို
TSL ကုန်ပစ္စည်းများ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အတူအသံကျော် IP ကိုပြောသွား
Pronology နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်အစွန်းပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကျနော်တို့ရဲ့ client ကို enable ရန်ဖြစ်ပါသည်
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အတူ Pronology ဆွေးနွေးပွဲပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု
ဗီဒီယိုများအတွက်အသံနားလည်ခြင်းပေါ်တွင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဤနိဒါန်းမှာတော့ Addison ရှယ်ယာအကြံပေးချက်များ။
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဗီဒီယိုများအတွက်အသံနားလည်ခြင်း
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဤနိဒါန်းမှာတော့ Addison ပရော်ဖက်ရှင်နယ် camer နားလည်သဘောပေါက်အပေါ်အကြံပေးချက်များမျှဝေ
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများနားလည်ခြင်း
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးသင်ခန်းစာဤနိဒါန်းမှာတော့ Addison Ricci lig နားလည်သဘောပေါက်အပေါ်အကြံပေးချက်များမျှဝေ
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဗီဒီယိုအလင်းပေးခြင်းကိုနားလည်ခြင်း
NexGuard တစ် Civolution ကုမ္ပဏီ, မှုခင်းရေမှတ်နည်းပညာနှင့် sol တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါသည်
Forensic ရေစာအကြောင်း NexGuard ချတ်များ
Archiware ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး Manager ကို NAB က S ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်ဒေါက်တာမာ့ခ်အမ် Batschkus,
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ကွန်းအကြောင်း Archiware ချတ်များ
ဤဇာတ်လမ်းပိုင်း၌သင်တို့ကိုဗီဒီယို DSLR ကင်မရာများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူမည်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်။ ဒီသင်ခန်းစာအဘို့ဖြစ်၏
ဗီဒီယို DSLR ကင်မရာများ / HDSLR နားလည်ခြင်း
Telestream ့ဖြစ်သူ Scott Murray ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ထားသောလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက် NAB ပြရန်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
ပွင့်လင်းပြီးတော့ပိတ်ထားသော Workflows အကြောင်း Telestream ဆွေးနွေးပွဲ
အွန်, ကနေဒါမှာရှိတဲ့ Evertz ၏ mo Goyal NAB ပြရန်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင် transitionin အကြောင်းကို LIVE
Evertz ပြီးတော့ IP ကိုရန်အဆိုပါအကူးအပြောင်း
မိုက်ကယ်အို Connel, NAB ပြရန်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူ Pixel ပါဝါချတ်ဒ EVP မကြာသေးမီ announ အကြောင်းကို LIVE
NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အတူ pixel ပါဝါဆွေးနွေးပွဲ Virtualization
Tedial ၏ဂျေး Batista NAB ပြရန်၏ရိုင်ယန် Salazar ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. LIVE နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်။ Tedial ဖြစ်ပါသည်
Tedial #39; ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း s ကိုဂျေး Batista ဆွေးနွေးပွဲ
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ၏အဲရစ် Openshaw NAB ပြရန်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်သည့် evolutio အကြောင်းကို LIVE
ရှင်ပေါလု Babb, MAXON အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တည်ထောင်သူအသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်သမိုင်းဏနှင့် ပတ်သက်. Beat
MAXON အမေရိကန်နိုင်ငံ #39; s ကိုတည်ထောင်သူရှင်ပေါလု Babb: အကြို NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်
NAB ပြရန်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူ NewBlueFX ချတ်ဒ Travis White ကသူတို့ရဲ့ TITLE ဆော့ဖျဝဲအကြောင်းကို LIVE ။
NewBlueFX ဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဂရစ်ဖစ်: အကြို NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကျေးအတွက်သိုလှောင်မှု Workflows အကြောင်းကို quantum s ကို Geoff Stedman ဆွေးနွေးပွဲ
ကွမ်တမ် #39; Geoff Stedman ဆွေးနွေးပွဲထုတ်လုပ်မှုအတွက်သိုလှောင် Workflows အကြောင်း s: အကြို NAB Show ကိုမေးမြန်းချက်
အသံလွှင့်ဂျွန် Sandeman iOgrapher ၏တည်ထောင်သူ, Ado မှာ Dave Basulto နှင့်အတူမဂ္ဂဇင်းချတ် Beat
Dave Basulto Adobe ကဗီဒီယိုကမ္ဘာ့ဖလားမှာ iOgrapher တင်ဆက်ပေးတယ်
မြင်ယောင်ကြည့်ပါဆက်သွယ်ရေးကနေမိုက်ကယ်သူပုန်သူတို့ရဲ့မကြာသေးမီကကြေညာအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့် Beat တွေနဲ့ချက်တင်ထိုင်
NAB Show ကို New York မြို့မှာဆက်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ Zenium မြင်ယောင်ကြည့်ပါ
မြွေဆိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ် Lauren Carter ကဂျုံးစ်နဲ့ NA မှာ ADDERView DDX30 အသံလွှင့် Beat s ကိုပရိသတ်ကိုပြသ
NAB Show ကို New York မြို့မှာ AdderView DDX30!
MyCaseBuilder.com ၏စတိဗ်ဟော်လန်အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်သည့် 2015 မှာမဂ္ဂဇင်း Beat
အဆိုပါဗီဒီယိုသတင်းထောက်ကျောပိုးအိတ်တခုတတ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, profe အသုံးပြုရန် key ကိုဖြေရှင်းချက်အထုပ်စံပြ turn
Sony က #39; CCW 2015 မှာကိုယ့်ဗီဒီယိုသတင်းထောက်ကျောပိုးအိတ်!
Sony က Professional ကအမေရိကန်နိုင်ငံကနေအဲလက်စ်ရော့စီအတွက် 100 CCW SATCON မှာရိုင်ယန် Salazar သူတို့ရဲ့ PWS 1RX2015 ပြသ
CCW100 မှာ PWS 1RX2015 ကြိုးမဲ့လွှ Receiver
Sony က Professional ကအမေရိကန်နိုင်ငံကနေအဲလက်စ်ရော့စီကို Sony s ကို PXW X4002/3CMOS Cam အကြောင်းကိုရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
Sony က Quote PXW X4002/3ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်; CCW 2015 မှာ CMOS တီဗွီကင်မရာ
Osprey ဗီဒီယိုရှယ်ယာ Shelby Smith ကအဆိုပါ Osprey ၏သမိုင်းအဖြစ်၎င်းတို့၏မကြာသေးမီထုတ်ကုန်အချို့
Osprey ဗီဒီယို: သူတို့၏သမိုင်းနှင့်လတ်တလောကုန်ပစ္စည်းကြေငြာချက်များ
အသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူအိုင်ပီနည်းပညာတွေအကြောင်းဆိုနီအီလက်ထရွန်းနစ်ဆွေးနွေးပွဲ Deon LeCointe ။
အသံလွှင့်အတွက် IP ကိုနည်းပညာအကြောင်းဆိုနီအီလက်ထရွန်းနစ်ဆွေးနွေးပွဲ
ကှတျချစက္ခုဗေဒကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီရုပ်ရှင်ပညာမျက်ကပ်မှန်အဘို့အလူသိများသည်နှင့်ထုတ်လွှင့်၏ Janet အနောက် Maga Beat
IBC 2015 မှာကှတျချစက္ခုဗေဒဆွေးနွေးပွဲမှန်ဘီလူး
Piksel ၏ Neil Berry ဟာသူတို့ရဲ့ IBC နှင့်အတူ IBC 2015 မှာမဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်၏ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြောသော
သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် / IBC 2015 မှာန်ဆောင်မှုများအကြောင်း Piksel ဆွေးနွေးပွဲ!
NexGuard ၏ Harry Tholen သူတို့ IBC 2015 မှာမဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်၏ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြောသော
IBC 2015 မှာ, ဥပဒေရေးရာရေစာအကြောင်း NexGuard ဆွေးနွေးပွဲ
အသံလွှင့်၏ Janet အနောက်မဂ္ဂဇင်းသူတို့ IBC 2015 မှာ Vislink ၏ Ayes Amewudah နှင့်အတူပြောတတ် Beat
အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 2015 မှာ Vislink ကြေညာချက်များ
Paywizard ထံမှယောနသန်သည် Guthrie IBC 2015 မှာမဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်၏ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြော၏။ pa
Paywizard ဆွေးနွေးပွဲ OTT amp; ထိပ်တန်းစာရင်းပေးသွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရေး 2015 IBC Show မှာ Set
Contentwise ၏ Pancrazio Auteri IBC 2015 နှင့်ရှယ်ယာ t ကိုမှာထုတ်လွှင့်ဘိ၏ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြောသော
IBC 2015 မှာအကြောင်းအရာ Personalisation စာအကြောင်း Contentwise ဆွေးနွေးပွဲ
Cantemo ၏ CEO ဖြစ်သူ Cantemo Portal နှင့်မီဒီယာတစ်ဦးကအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း၏ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြောသော
Cantemo 2015 IBC Show မှာသူတို့ရဲ့နည်းပညာမျှဝေ ...
Audinate ယောရှု Rush သူတို့ရဲ့မကြာသေးမီထုတ်ကုန်ကြေညာချက်နှင့်အတူ IBC 2015 မှာ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြောသော
Audinate ဆွေးနွေးပွဲ 2015 IBC Show မှာကုန်ပစ္စည်းကြေညာချက်များအကြောင်း
Cinegy ၏ Lewis က Kirkaldie သူတို့ရဲ့ 2015 IBC အကြောင်းကိုမဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်၏ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြောသော
2015 IBC ပြရန်အကြောင်း Cinegy ဆွေးနွေးပွဲ IBC 2015 မှာကြေညာချက်များ
Matrox ၏ Francesco Scartozzi သူတို့ရဲ့ 201 အကြောင်းကိုမဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်ထံမှ Janet အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြောသော
2015 IBC ပြရန်သတင်းအကြောင်း Matrox ဆွေးနွေးပွဲ
AirTies ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်၏ Bulent Celebi မဂ္ဂဇင်းထုတ်လွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar နဲ့ချက်တင် Beat ထားပါတယ်
မူလစာမျက်နှာလွှနှင့် OTT ဖုန်းများအတွက်အပေါ် AirTies ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်
အသံလွှင့်ကနေရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူ Anvato ချတ်၏, Matt Smith ကသူတို့ရဲ့တီဗီ Everywhe အကြောင်းကိုမဂ္ဂဇင်း Beat
နေရာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တီဗီအကြောင်း Anvato ဆွေးနွေးပွဲပလက်ဖောင်း
ဒေါက်တာ Siegfried Foessel, Fraunhofer IIS မှာရုပ်ပုံ Technologies က Moving ဌာနမှူးတစ်ဦး di ရှိပါတယ်
Fraunhofer #39; အသံလွှင့် Beat အတူ s ကိုဒေါက်တာ Siegfried Foessel ချတ်များ
ဒေါက်တာ Shahin Arefzadeh အသံလွှင့် Beat s ကိုပရိသတျမှ Dimetis မိတ်ဆက်။ သူလည်း Dimetis အကြောင်းကိုပြောသွား
amp စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း Dimetis ဆွေးနွေးပွဲ; ထိန်းချုပ်ရေး Solutions
အသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar ဒန် Dugan အသံဒီဇိုင်း၏ဒန် Dugan နှင့်အတူ chat ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ : D
ဒန် Dugan: အအလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဖုန်းရောနှော၏တီထွင်သူ
StorNext®ရှုပ်ထွေးတဲ့အသင်းအချက်အလက်တွေကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုဖြစ်ပါသည်
ကွမ်တမ် #39; StorNext5စကေးထဲကသိုလှောင်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် s ကိုအဲလက်စ်မမေ့ဘူး
အသံလွှင့်ဘိ၏ရိုင်ယန် Salazar ကသူ၏မကြာသေးခင်က appo အကြောင်းကိုဒေါက်တာ Giles Wilson ကအတူကြီးမြတ်ဆွေးနွေးမှုရှိပါတယ်
အသံလွှင့် Beat တွေနဲ့ Ericsson ကချတ်များဒေါက်တာ Giles Wilson က
အသံလွှင့်၏ရိုင်ယန် Salazar Erik Iversen, Image ကိုထုတ်ယူခြင်းကုန်ပစ္စည်း Manager ဖြင့်မဂ္ဂဇင်းချတ် Beat
Image ကိုထုတ်ယူခြင်းအကြောင်း BARCO ဆွေးနွေးပွဲ
Greggory Heil, Encoding.com ၏ CEO နှင့်တည်ထောင်သူအသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း၏ရိုင်ယန် Salazar နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်
အသံလွှင့် Beat တွေနဲ့ Encoding.com ဆွေးနွေးပွဲ Transcoding
Jampro antenna Inc ကိုတစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော် pric မှာအရည်အသွေးပြည့်ထုတ်လွှင့်စနစ်များဘို့လိုအပ်ကြောင်း၏ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်
JAMPRO antenna ဆွေးနွေးပွဲမျှော်စင်!
Allant အဆင့်မြင့်တီဗီကြော်ငြာဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဒေတာများထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ် data နဲ့စအိုထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
အဆင့်မြင့် Advertising ကြော်ငြာအကြောင်း ALLANT အုပ်စုချတ်